Shuruudaha iyo Xaaladaha xubinnimada Ebuno
Si aad u awoodo inaad isticmaasho Ebuno, fadlan aqbal shuruudaha iyo shuruudaha
Ebuno Ebuno AB
Ebuno AB, shirkad iswiidhish ah oo leh hay'ad shirkadeed nambarkoodu yahay 559183-6027 ("Ebuno","we","our"Ama"us”), Ayaa mas'uul ka ah ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed sida hoos lagu sharaxay. Nidaamkan asturnaanta wuxuu khuseeyaa adiga diiwaangeliya koonto oo noqda isticmaale Ebuno.
Waxaan danaynaynaa oo aan qadarinaynaa arimahaaga gaarka ah. Iyada oo loo marayo siyaasaddan asturnaanta waxaan markaa dooneynaa inaan ku siino macluumaad ku saabsan sida aan u shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale xuquuqda aad leedahay ee la xiriira ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Waxaan uga shaqeyneynaa xogtaada shakhsiyeed ujeedooyinka guud ee soo socda:
si loo abuuro loona maamulo koontadaada Ebuno;
si loo abuuro loona maamulo astaantaada bogga 'Ebuno';
si aad ugu habboonaato astaantaada xog-ururin adiga kugu habboon;
in la bixiyo baaritaanno;
inaad maamusho ka noqoshada dhibcaha kaararka hadiyadaha iyo lacagta PayPal;
si loo bixiyo adeegga macaamiisha loona hagaajiyo degelkeenna iyadoo la falanqeynayo jawaab celinta;
inaad maamusho isdhexgalkaaga annaga xisaabtayada xiriirka bulshada;
inaad u hogaansanaato waajibaadkayaga sharciyeed isla markaana aad ka qabato sheegashooyinka sharci ee suurtogalka ah.
Hoos waxaad ka akhrisan kartaa waxbadan oo ku saabsan sida aan ugu shaqeyno xogtaada shaqsiyeed. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, ama haddii aad rabto inaad ku isticmaasho mid ka mid ah xuquuqdaada sharciga qaanuunka ilaalinta, fadlan nagala soo xiriir cinwaanka emaylkeena [emailka waa la ilaaliyay] ama na soo wac + 46 (0) 73 143 8750 . Cinwaankeena boostada waa Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Sweden.
Hoos waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mowduucyada soo socda:
Halkeen ka soo ururinaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed oo lagaa doonayaa inaad na siiso xogta shakhsiga ah? 2
Kumaa heli kara marin u helka macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo sababtee? 2
Aaway xogtaada shaqsiyadeed? 2
Maxay yihiin xuquuqda aad ku leedahay la-socodsiinta macluumaadkaaga shaqsiyeed? 3
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan sida aan ugu shaqeyno xogtaada shaqsiyeed 4
Haddii aad diiwaangeliso koonto oo aad noqoto isticmaale Ebuno 4
Haddii aad kaqaybqaadato sahannada iyo / ama cayaaraha waxaan bixinnaa 5
Haddii aad nagala macaamisho baraha bulshada 7
Hawlaha kale ee ka shaqaynta 8
Isu dheellitirka qiimeynta danaha 9
Halkeen ka soo ururinaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed oo lagaa doonayaa inaad na siiso xogta shakhsiga ah?
Waxaan si toos ah kaaga soo aruurineynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed, tusaale ahaan markii aad diiwaangeliso koonto oo aad ka jawaabto su'aalaheena ku saabsan qaabeynta.
Qaar ka mid ah su'aalaheena soo-saarista waxaad dooran kartaa inaad nala wadaagto macluumaadka shakhsiyeed ee xasaasiga ah (tusaale xogta ku saabsan caafimaadkaaga). Kajawaabida su'aalahan waa ikhtiyaari waxaanan ka baaraandegi doonaa xogta aad nala wadaagto kaliya haddii aad si cad u bixiso oggolaansho .
Guud ahaan, waad xor u tahay inaad doorato haddii aad rabto inaad na siiso macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed. Si kastaba ha noqotee mararka qaarkood waa lagama maarmaan inaad adiga na siiso macluumaadka shakhsi ahaaneed, tusaale ahaan inaad diiwaangeliso koonto. Xogta dhabta ah ee shakhsiyadeed ee aan kaa dooneyno waxaa laga heli karaa jadwalka hoose ee la xiriira saldhigyada sharciyeed "fulinta heshiiska" iyo "waajibaadka sharci". Xogta aan kaa dooneyno waligeed ma ahan xog xasaasi ah.
Haddii aadan na siinin xog shaqsiyeed la codsaday, ma awoodi doontid inaad kaqaybqaadatid sahannada ama ciyaaraha aan bixinno ama abuureyno oo aan isticmaaleyno koonto. Intaas waxaa sii dheer, ma awoodi doonno inaan u hoggaansano sharciga xisaabinta iyo xisaabinta iyo inuu maareeyo sheegashooyinka sharci ee suurtagalka ah.
Kumaa heli kara marin u helka macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo sababtee?
Xogtaada shakhsiga ah ayaa ugu horreyntii waxaan ka shaqeyneynaa Ebuno. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, waxaan la wadaagnaa xogtaada shakhsiyeed dhinacyada saddexaad si waafaqsan hoos.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato cidda aan la wadaageyno xogtaada shaqsiyeed, fadlan si xor ah nala soo xiriir. Faahfaahinta xiriirkeena waxaa laga heli karaa bilowga siyaasaddan asturnaanta.
Macno malahan ujeedada aan ka shaqeyneyno xogtaada shaqsiyeed, waxaan la wadaageeynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed alaab-qeybiyeyaashayada IT-da kuwaas oo ku baari doona kuwan anaga oo ku hadlaya magacayaga iyo tilmaamahayaga si loo hubiyo hawlgallada IT-ga ee wanaagsan oo aamin ah. Waxaan kaliya la wadaageynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed alaab-qeybiyeyaashayada IT-da haddii ay lagama maarmaan tahay si ay u gutaan waajibaadka naga saaran annaga oo waafaqsan heshiiska aan kula jirno.
Hadaad kaqaybqaadatid sahaminta
Si laguu siiyo sahan adiga kugu habboon, waxaan la wadaageynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed lamaanahayaga kuwaas oo bixiya sahaminta. Wada-hawlgalayaasheennu waxay u dhaqmaan sidii dhinacyo dhexdhexaadin ah oo naga dhexeeya annaga iyo shirkadaha raadinaya ka-qaybgalayaasha sahannada iyagoo ku habboon astaamahaaga iyo baahiyaha shirkadaha sahaminta.
Si loo maamulo ka bixitaankaaga dhibcaha lacagta PayPal, waxaan la wadaagi doonnaa macluumaadka ku saabsan bixintaada PayPal. PayPal waxay usameyn doontaa xogtaada sida koontaroole, taasoo la micno ah inay mas'uul ka yihiin howlahooda wax qabad.
Aaway xogtaada shaqsiyadeed?
Annaga, iyo sidoo kale hawlwadeenadeena, waxaan inta badan ku shaqeynaa xogtaada shakhsi ahaaneed ee EU / EEA. Markii aan ka shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed meel ka baxsan EU / EEA waxaan sameyneynaa sababta oo ah lammaanahayada, oo naga caawiya inaan u dhigno astaantaada macluumaadka iyo sahaminta aad u aragto mid xiiso leh oo khuseeya, waxay keydin doontaa xogtaada shakhsi ahaaneed meel ka baxsan EU / EEA.
Markii aan wareejineyno xogtaada shaqsi ahaaneed meel ka baxsan EU / EEA, waxaan ku sameyneynaa iyada oo ku saleysan mid ka mid ah go'aanka Guddiga, qodobbada qandaraaska ee caadiga ah ama Shield Gaarka ah.
Maxay yihiin xuquuqda aad ku leedahay la-socodsiinta macluumaadkaaga shaqsiyeed?
Sida ku xusan sharciga ilaalinta macluumaadka ee khuseeya, iyadoo kuxiran duruufaha jira, waxaad xaq u leedahay dhowr xuquuqo oo kala duwan kuwaasoo hoos ku xusan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid xuquuqdan ama haddii aad rabto inaad isticmaasho mid ka mid ah xuquuqdaada, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto. Faahfaahinta xiriirkeena waxaa laga heli karaa bilowga siyaasaddan asturnaanta.
Xuquuqda macluumaadka iyo helitaanka
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho a xaqiijin haddii aan ka shaqeyno xogtaada shaqsiyeed. Haddii aan ka shaqeyno xogtaada shaqsiyeed, waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad hesho macluumaad ku saabsan sida aan u shaqeyno xogta shaqsiyeed iyo inaad hesho nuqul macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xog shaqsiyeed aan sax ahayn ayaa la saxay iyo inuu yeesho xog shaqsiyeed aan dhameystirneyn.
Xuquuqda in la tirtiro ("xaq u lahaanshaha la ilaaway") iyo xaddidaadda howsha
Xaq ayaad u leedahay ha la tirtiro xogtaada shaqsiyeed xaaladaha qaarkood. Tani waa kiiska tusaale ahaan markii xogta shaqsiyadeed aysan daruuri u ahayn ujeeddooyinka loo soo ururiyey ama haddii kale loo shaqeynayay iyo halka aan uga shaqeyneyno xogtaada shakhsi ahaaneed iyada oo ku saleysan dantayada sharciga ah ee aan helno, ka dib diidmadaada (eeg hoosta hoosta Xuquuqda sheyga), inaynaan dan weyn ka lahayn sii wadida hawsheeda.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato annaga xaddid hawshayada macluumaadkaaga shakhsiyeed. Tusaale ahaan, markaad weydiiso sax ahaanta xogta shaqsiyadeed, markaad diidan tahay ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyadoo lagu saleynayo dantayada sharciga ah, ama halka ay howshu sharci darro ka tahay, oo aad ka soo horjeedo tirtirka macluumaadkaaga shakhsiyeed oo aad rabto anaga si aan u xakameyno howsheena.
Xaqa la qaadi karo xogta
Xaaladaha qaarkood, waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo xog shaqsiyadeed noocaas ah (oo adiga kugu saabsan) oo aad na siisay, qaab qaabaysan, qaab caadi ah loo adeegsado iyo mashiin lagu akhrin karo. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay mararka qaarkood xogta shakhsiyadeed ee noocan oo kale ah in lagu wareejiyo kantaroole kale, halkaas oo farsamo ahaan macquul ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad ka dhiidhid habka aan u shaqeyno ee macluumaadkaaga shaqsiyeed haddii aan u isticmaalno ujeedooyinka suuq geynta.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad ka dhiidhiso habka aan u shaqeyno ee macluumaadkaaga shaqsiyeed marka howshu ku saleysan tahay sharciga “Dan sharci ah”. Xaaladaha markaan ku saleyno howsheena ku saleysan dantayada sharciga ah waxaa lagu sheegay jaantusyada hoose waxaadna ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan isku dheelitirka qiimeynta xiisaha ee dhamaadka siyaasaddan asturnaanta. Mararka qaar, waan sii wadi karnaa inaan ka shaqeyno xogtaada shaqsiyeed xitaa haddii aad diidan tahay howsheena. Tani waxay noqon kartaa kiiska haddii aan muujin karno sababo sharci ah oo qasab ah oo ku saabsan ka shaqeynta oo ka culus danahaaga ama haddii ujeedadu tahay in la dhiso, la jimicsado ama laga difaaco sheegashooyinka sharciga ah.
Xaqqa inaad ka noqoto ogolaanshaha
Waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshaha lagu siiyay wakhti kasta. Ka bixitaanka wax saameyn ah kuma yeelan doono sharci ahaanta howsha iyadoo lagu saleynayo ogolaanshahaaga ka hor bixitaanka.
Waxaad xaq u leedahay inaad u gudbiso cabasho hay'adda kormeerka
Xaq ayaad u leedahay u dacwooto hay'ad kormeer ku saabsan ka shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Cabashada noocan ah waxaa loo gudbin karaa hay'ada EU / EEA ee wadanka aad ku nooshahay, aad ka shaqeyso ama halka ay ka dhacday ku xad gudubka sharciga ilaalinta macluumaadka khuseeya. Iswidhan gudaheeda, hay'adda kormeerku waa Hay'adda Ilaalinta Macluumaadka Iswidhishka.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan sida aan ugu shaqeyno xogtaada shaqsiyeed
Jaantuska hoose wuxuu si faahfaahsan u sharxayaa sababta aan u shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed, xogta shakhsiga ah ee aan shaqeyno, aasaaska sharciga ee howsha iyo inta aan ka shaqeyneyno xogtaada shakhsi ahaaneed.
Haddii aad diiwaangeliso koonto oo aad noqoto isticmaale Ebuno
Si aad u maamusho koontadaada
Maxay tahay howsha aan qabanno
Waa maxay macluumaadka shaqsiyeed ee aan ku shaqeyno
Saldhigeena sharciga ah ee howsha
In la abuuro oo laguu suuro geliyo inaad si ammaan ah u isticmaasho koontadaada, oo ay ku jirto inay kula soo xiriiraan adiga oo ku saabsan koontadaada
Si laguu siiyo faa iidooyinka aad leedahay koonto, oo ay ka mid yihiin tusaale awood kuu siinaya inaad maamusho dejintaada iyo helitaanka marinka taariikhda sahamintaada
Si aad ula socoto dhibcaha aad ka heshay sahanno kala duwan oo dhammaystiran
Si loo xisaabiyo darajadaada marka loo eego kuwa kale ee Ebuno ee ku saleysan dhibcahaaga
Macluumaadka aad na siiso, tusaale:
Macluumaadka xiriirka (emayl)
Koodhka boostada iyo magaalada
Tirada xogururinta aad dhamaysay iyo dhibcaha aad soo ururisay
Macluumaadka kale ee aad doorato inaad na siiso, sida cinwaanka wadada iyo lambarka taleefanka
Hawlgalku wuxuu noo muhiim u yahay inaan fulino qandaraaska ku saabsan diiwaangelintaada Ebuno.
Danta xalaasha ah
Muhiim ma ahan inaad na siiso macluumaad ku saabsan cinwaankaaga dariiqa iyo lambarka taleefankaaga si aad u buuxiso qandaraas kasta. Macluumaadkan waxaa loo shaqeeyaa iyada oo ku saleysan dantayada sharciga ah ee lagu shaqeynayo xogtaada shakhsi ahaaneed si loo maareeyo koontadaada.
Si aad ula socoto markii aad u dirtay saaxiib Ebuno iyo inta dhibcood ee ay soo ururiyeen si ay kuugu abaalmariyaan dhibco dheeri ah
Qodobbada aad soo ururiso
Magaca saaxiibkaa aad gudbisay
Tirada dhibcaha uu saaxiibkaa sheegtay
Dantayada sharci ahaaneed ee ah inaan ka shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan kuugu abaalmarinno qodobbada dheeraadka ah ee qorista mid ka mid ah saaxiibbadaada Ebuno.
Haddii aad tahay saaxiibti loo soo gudbiyey oo aad diiwaangeliso koonto, waxaan ka baaraandegi doonnaa xogtaada shakhsi ahaaneed iyadoo lagu saleynayo waxqabadka qandaraaska, fadlan kor ka eeg.
Muddada Kaydinta: Waxaan ku keydin doonnaa xogtaada shakhsi ahaaneed illaa aad ka doorato inaad tirtirto koontadaada Ebuno ama illaa intaad ka shaqeyneyso 3 sano.
Si aad u maamusho astaantaada
In aan ku weydiiyo su'aalo si aan kuugu abuuro muuqaal kuu gaar ah oo la jaan qaadi kara sahannada la xiriira
Si laguu siiyo sahanno ku habboon danahaaga iyo qofkaaga
Si aad ula socoto su'aalaha aad ka jawaabeyso si aad kuugu abaal mariso dhibco dheeri ah
Ogsoonow inay ikhtiyaari u tahay ka jawaabida su'aalahan oo aad doorato macluumaadka aad rabto inaad nala wadaagto.
Macluumaadka ku saabsan reerkaaga, waxbarashadaada iyo shaqadaada, baabuurka, cuntada iyo cabitaanka, hiwaayadaha iyo waxyaabaha aad xiiseyso, elektarooniga, kombiyuutarka iyo ciyaarta fiidiyowga, warbaahinta, safarka iyo baaritaannada cilmi-baarista ee aad diyaar u tahay inaad ka qaybgasho
Macluumaadka ku saabsan jinsiyadaada, sigaar cabista iyo caadooyinka tubaakada, daryeelka caafimaadka iyo carruurta ugu dambeysa
Dantayada sharci ahaaneed ee ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed ee aad dooratay inaad na siiso si aan u awoodno abuurista iyo maamulida astaantaada.
Macluumaadka xasaasiga ah waxaa lagu shaqeyn doonaa iyadoo lagu saleynayo ogolaanshahaaga cad. Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaas wakhti kasta. Waxa kale oo aad beddeli kartaa qaar ka mid ah jawaabihii aad siisay "Waxaan doorbidaa inaanan ku dhawaaqin tan".
Muddada Kaydinta: Waxaan keydineynaa xogtaada shakhsi ahaaneed illaa aad ka doorato inaad tirtirto koontadaada, illaa intaad ka gaabi laheyd 3 sano ama ilaa aad ka bedeleyso jawaabahaaga "Waxaan door bidaa inaanan ku dhawaaqin tan". Waan joojin doonaa kaydinta macluumaadkaaga shakhsiga ah ee xasaasiga ah isla markiiba haddii aad ka noqoto ogolaanshahaaga.
Haddii aad kaqaybqaadato sahannada iyo / ama cayaaraha aan bixinno
Si aad ugu suurtageliso astaantaada macluumaadka in lagu waafajiyo sahannada ku habboon
Si aad awood ugu yeelatid astaantaada macluumaadka inay la jaanqaado sahanno waxaad ka helaysaa mid khuseeya oo xiiso leh waxaan la wadaageynaa macluumaadka lamaanayaashayada
Lammaanahayagu wuxuu u dhigmaa astaantaada shirkadaha sahaminta ku leh gudaha EU iyo dibadda EU
Macluumaad kale oo ka mid ah su'aalaha wax soo saarka aad dooratay inaad ka jawaabto
Dantayada sharci ahaaneed ee aan uga shaqeyneyno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan ugu suurtagelino astaantaada macluumaadka inay la jaanqaado sahanno aad ka heshay oo ku habboon.
Muddada Kaydinta: Waxaan ka baaraandegi doonnaa xogtaada shakhsi ahaaneed illaa inta u dhigma laga sameynayo. Waxaan joojin doonaa keydinta macluumaadkaaga shakhsiga ah ee xasaasiga ah isla marka aad ka noqoto ogolaanshahaaga ama aad u bedesho jawaabahaaga "Waxaan door bidaa inaanan shaaca ka qaadin tan".
Si loo bixiyo sahanno
Si laguu siiyo adiga sahanno aad ka qayb qaadan karto
Si laguugu abaalmariyo dhibcaha sahan kasta oo aad ka qaybqaadato
Ogsoonow inaan ku siineyno fursad aad kaga qaybgasho sahannada, laakiin sahannada dhabta ah waxaa maamula cid saddexaad. Haddii aad doorato inaad sheegto magacaaga ama wixii macluumaad kale ah ee adiga kugu saabsan sahan, shirkadda sahamintu waxay awoodi doontaa inay kugu xidho jawaabahaaga shaqsi ahaan. Xaaladaha noocaas ah, shirkadda sahanku waxay noqon doontaa kantaroole. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato sida ay u shaqeeyaan xogtaada waxaad la xiriiri kartaa shirkadda ay khuseyso.
Macluumaadka aad na siisay iyada oo loo marayo astaantaada
Dantayada sharci ahaaneed ee ah ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed si aan kuu siino sahanno aad ka qaybqaadan karto.
Muddada Kaydinta: Waxaan ka baaraandegi doonnaa xogtaada shakhsi ahaaneed illaa iyo inta daraasaddu ka dhammaanayaan.
Si loo bixiyo ciyaaro
Si laguu siiyo ciyaaro aad ciyaari karto
Si aad u xisaabiso dhibcahaaga kulan kasta ka dib adigu waad badisay ama lumisay
Si loo xisaabiyo darajadaada marka loo eego ciyaartooyda kale
Tirada dhibcaha aad soo ururisay
Tirada dhibcaha aad guuleysato ama lumiso markaad ciyaareyso kulamada
Dantayada sharci ahaaneed ee ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed si laguu oggolaado inaad la ciyaarto ciyaaro aan bixinno, helno fursad aad ku guuleysato dhibco dheeri ah oo aad u aragto sida aad u kala sarreeysid isbarbardhigga isticmaaleyaasha kale.
Muddada Kaydinta: Waxaan keydineynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed illaa aad ka doorato inaad tirtirto koontadaada ama illaa intaad ka gaabinayso 3 sano.
Si aad u maamusho ka noqoshada dhibcahaaga adigoo ku beddelaya kaararka hadiyadaha
Inaad u rogto dhibcaha aad heshay kaararka hadiyadda
Si aan kuugu soo diro kaarka hadiyadda
Macluumaad ku saabsan kaarka hadiyadaha ee aad doorato
Hawlgalku wuxuu lagama maarmaan u yahay annaga si aan u dhammaystirno heshiiska ku saabsan xubinnimadaada Ebuno taas oo macnaheedu yahay inaad hesho dhibco lagala noqon karo kaararka hadiyadda iyadoo lagu beddelayo kaqeybgalka sahannada.
Muddada Kaydinta: Waxaan ka baaraandegi doonnaa xogtaada shakhsi ahaaneed illaa iyo inta ka bixitaanka laga dhameystirayo.
Si aad u maamusho ka noqoshada dhibcahaaga adoo ku beddelaya lacagta PayPal
Si dhibcaha aad heshay loogu beddelo lacagta PayPal
Si aan kuugu soo diro abaalmarinta PayPal
Ogsoonow si dhibcahaaga loogu beddelo lacagta PayPal waxaan la wadaageynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed PayPal. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida PayPal u socodsiiso xogtaada waxaad la xiriiri kartaa PayPal.
Hawlgalku waa lagama maarmaan si aan u dhammaystirno heshiiska ku saabsan xubinnimadaada Ebuno taas oo macnaheedu yahay inaad hesho dhibco lagala noqon karo lacagta PayPal iyada oo lagu beddelayo kaqeybgalka sahannada.
Muddada Kaydinta: Waan keydin doonaa xogtaada shaqsiyeed illaa iyo inta ka bixitaanka la dhameystirayo.
Hadaad nalala macaamilayso warbaahinta bulshada
In aan kula soo xiriiro baraha bulshada
In aan kula soo xiriiro akoonkeena warbaahinta bulshada (Facebook), tusaale ahaan haddii aad nala soo xiriirtid boggayaga
Macluumaadka ku saabsan astaantaada guud ee warbaahinta bulshada ee su'aasha ah (magaca isticmaalaha iyo sawir kasta oo aad u dooratay koontadaada)
Macluumaadka aad ku bixiso boggayaga
Dantayada sharci ahaaneed ee aan uga shaqeyneyno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan kugula soo xiriirno shabakadeena warbaahinta bulshada.
Muddada Kaydinta: Xogtaada shakhsiga ah waa lagaa saari doonaa haddii aad na weydiisato inaan ka saarno ama haddii aad adigu tirtirto waxyaabaha ku jira, laakiin waxaan si kale u keydin doonnaa xogta shakhsiga ah ee barxadda warbaahinta bulshada illaa ogeysiis dambe.
Hawlaha kale ee ka shaqaynta
Si loo bixiyo adeegga macaamiisha
Ka jawaab oo maamul arrimaha macaamiisha
Macluumaadka xiriirka ee aad ku bixiso xiriirkeena
Macluumaadka kale ee aad ka bixiso arrinta, tusaale ahaan cilad jirta
Dantayada sharci ahaaneed ee ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed si aan uga jawaabno oo aan u maamulno arrimaha adeegga macaamiisha.
Muddada Kaydinta: Waxaan keydin doonaa xogtaada shaqsiga ah mudo dhan 2 sano ka dib markii la xaliyay arrinta adeegga macaamiisha.
Si loo horumariyo adeegyadayada
Si loo horumariyo adeegyadayada iyo howlaha shabakada iyadoo lagu saleynayo ra'yi celintaada
Faahfaahinta xiriirka (e-mayl)
Macluumaadka kale ee aad na siiso marka aad noo soo dirto jawaab celinta
Dantayada sharci ahaaneed ee ah ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed si loo maareeyo ra'yi celintaada loona hagaajiyo adeegyadayada.
Muddada Kaydinta: Waxaan keydin doonaa xogtaada shaqsiga ah mudo dhan 2 sano.
Inuu maamulo wixii sheegasho iyo xuquuq ah
Wax ka qabato xuquuq kasta oo macaamil sida xuquuqda aad u leedahay inaad sameyso cabashooyin
Difaac nafteenna sheegashada iyo cabashooyinka
Bilaab sheegasho kasta
Faahfaahinta xiriirka ee aad dooratay inaad isticmaasho, tusaale cinwaanka iimaylka iyo / ama lambarka taleefanka
Macluumaadka xiriirka aan kula soo xiriirnay ee la xiriira sheegashada, tusaale macluumaadka ku saabsan ballansashada la xiriira ama macluumaadka ku saabsan joogitaankaaga
Waajib sharci ah
Hawlgalku wuxuu lagama maarmaan u yahay inuu u hoggaansamo waajibaadka sharciga ah ee aan saareyno, yacni u hoggaansanaanta waajibaadka sharciga ah ee na saaran.
Dantayada sharci ahaaneed ee ah inaan ka shaqeyno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan isaga difaacno dalab sharci oo suurtagal ah iyo inaan bilowno sheegasho kasta.
Muddada Kaydinta: Waxaan keydineynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed illaa aan ka shaqeyneyno cabashada, illaa aan ka qabaneyno midigta ama muddada uu muranku socdo.
Si aad ugu hogaansanaato xisaabinta xisaabaadka iyo sharciga xisaabaadka
Ku keydi macluumaadka xisaabinta iyo xisaabinta
Taariikhda la xiriirta bixitaanka iyo lacagaha la bixiyay
Macluumaadka kale ee ka kooban diiwaanada xisaabinta
Nidaamku wuxuu lagama maarmaan u yahay inuu u hoggaansamo waajibaadka sharciga ah ee na saaran, sida xisaabinta iyo sharciga xisaabinta.
Muddada Kaydinta: Waxaan keydineynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed illaa iyo marka lagu daro sanadka toddobaad kadib dhammaadka sanadka taariikheed ee sanad maaliyadeedka ay la xiriirto xogta shaqsiyeed.
Isku dheelitirka qiimeynta danaha
Sida aan kor ku soo sheegnay, ujeeddooyinka qaarkood, waxaan uga baaraandegnaa xogtaada shakhsi ahaaneed iyadoo lagu saleynayo "danteenna sharci". Anaga oo fulinay isku dheelitirka qiimeynta danaha ee ku saabsan ka shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed, waxaan ku soo gabagabeynay in dantayada sharciga ah ee ka shaqeynta ay ka culus tahay danahaaga ama xuquuqda aad u baahan tahay ilaalinta macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo la xiriira dheelitirka qiimeynta danahaaga, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto. Faahfaahinta xiriirkeena waxaa laga heli karaa bilowga siyaasaddan asturnaanta.
Nidaamkan asturnaanta waxaa aasaasay Ebuno AB markay ahayd 2020-01-10.
Ku saabsan CINT & Ebuno
Shuruudaha iyo Xaaladaha Xubinnimada Guddi, Ka Qaybqaadashada Sahanka iyo Adeegyada Adeegyada
Taariikhda Dhaqangalka: 28 February 2018
Markii ugu dambeysay ee dib loo eegay: 28 February 2018
Markii loo isticmaalo Shuruudahaan, ereyada soo socda iyo tibaaxaha waxay lahaan doonaan macnayaasha soo socda.
"Falanqeeye Firfircoon”Waxaa loola jeedaa Xubin Guddi ah oo leh: (a) Kaqaybqaadatay Sahan, (b) Barnaamij Cilmi-baaris kale; ama (c) qaybaha kale ee Adeegga, ugu yaraan, hal mar ka badan laba iyo tobankii (12) bilood ee la soo dhaafay; ama (d) la cusbooneysiiyay astaamihiisa / keeda ama macluumaadka xubinta ugu yaraan hal mar laba iyo tobankii (12) bilood ee ugu dambeeyay.
"Adeegga Dabagalka Cilmi-baarista Suuqa”Waxaa loola jeedaa Adeeg uu aqbalay Isticmaalaha oo dabagal ku sameyn kara habdhaqanka khadka tooska ah ee isticmaalahaas, sida websaydhada ay galaan isticmaalaha iyo ololeyaasha khadka tooska ah ee loogu talagalay isticmaalaha ujeedooyin cilmi baaris suuq ah, oo ay kujirto baaritaanka raadinta xayeysiinta
"Law Khusayso”Waxaa loola jeedaa khuseeya shuruucda iyo qawaaniinta qaranka iyo / ama deegaanka.
"Client”Waxaa loola jeedaa macaamiisheenna aan siino adeegyada.
"Content”Waxaa loola jeedaa macluumaadka ku jira Boggeena, Goob Daraasad, Goob Guddi ama Site Partner.
"guddi”Waxaa loola jeedaa koox shaqsiyaad ah oo ogolaaday in lagu casuumo oo ay kaqeyb qaataan cilmi baarista suuqa, barnaamijyada kale ee cilmi baarista ama qeybaha kale ee adeegyada loogu talagalay cilmi baarista suuqa.
"Xubin Guddi”Waxaa loola jeedaa xubin ka tirsan Guddi.
"Milkiilaha Guddi”Waxaa loola jeedaa milkiilaha Guddi iyo Bar Guddi aad Xubin Guddi ka tahay.
"Goobta Guddi”Waxaa loola jeedaa degel ay shaqsiyaadka iska diiwaangelin karaan si ay u noqdaan Xubin Guddi.
"Partner”Waxaa loola jeedaa mid ka mid ah wada-hawlgalayaashayada, oo ay ku jiraan Milkiileyaasha Guddiga iyo la-hawlgalayaasha kale.
"Site Partner”Waxaa loola jeedaa degel ay maamusho mid ka mid ah Wada-hawlgalayaashayada.
"Kaqaybgalaha”Waxaa loola jeedaa shaqsi, oo aan xubin ka ahayn Guddi, oo lagu jiheeyey Daraasad, Barnaamij Cilmi-baaris kale ama qaybo kale oo Adeegyada ah oo ka socda Mid ka mid ah Wada-hawlgalayaashayada.
"Macluumaadka Shakhsiga”Waxaa loola jeedaa macluumaad kasta oo la xiriira qof dabiici ah oo la aqoonsan yahay ama la aqoonsan karo (“Mawduuca Xogta”); qofka dabiiciga ah ee la aqoonsan karo waa midka la aqoonsan karo ama la raadsan karo, si toos ah ama si aan toos ahayn, gaar ahaan tixraaca aqoonsi keligiis ama marka lagu daro macluumaad kale oo shaqsiyeed ama aqoonsi. Macluumaadka Shakhsiyeed waxaa ku jiri kara macluumaad sida magaca, lambarka sooshal sekuuritiga, taariikhda iyo goobta dhalashada, magaca gabadha hooyadeed, diiwaanada bayoolaji, sawirro, cod ama duubitaan muuqaal ah, iyo macluumaad kale oo xiriir la leh ama lala xiriiri karo shaqsi, sida caafimaadka, waxbarashada , dhaqaalaha, iyo macluumaadka shaqada. (XUSUUS: Xogta Shakhsi ahaaneed waxaa sidoo kale loo gudbin karaa Macluumaadka Shaqsi Lagu Aqoonsan Karo ama PII.)
"Barnaamijka Cilmi baarista”Waxaa loola jeedaa fursad cilmi baaris aan ka aheyn Sahan.
"Mawduuc xaddidan”Waxaa loola jeedaa macluumaadka qarsoodiga ah iyo / ama lahaanshaha, agabyada, alaabada, iyo Waxyaabaha aan iska leenahay iyo / ama Milkiilaha Guddi, Milkiile Sahan, Macmiil, Wadaag iyo / ama shati-bixiye.
"Service”Waxaa loola jeedaa adeegga aan bixinno ee adiga kuu oggolaaneysa, Xubin Guddi ama Kaqeybgal inaad kaqeybqaadato (a) Guddi ama Sahan, (b) barnaamij kale oo cilmi baaris ah, ama (c) adeeg kasta oo kale oo aan bixinno adigu isticmaashay, sida Adeegga Dabagalka Cilmi-baarista Suuqa.
"u gudbinta”Waxaa loola jeedaa dhammaan faallooyinka, jawaab celinta, soo-jeedinta, fikradaha iyo macluumaadka kale ee aad soo gudbiso ama Aan soo ururinno marka aad ka qaybqaadato Guddi, ka jawaabto Daraasad ama Barnaamij Cilmi-baaris kale ama aad adeegsanayso Adeeg.
"Mulkiilaha Sahanka”Waxaa loola jeedaa milkiilaha Sahan, oo sida caadiga ah Macmiil.
"Goobta Sahaminta”Waxaa loola jeedaa websaydhka aad Kajawaabto oo aad ku buuxiso Sahan.
"Sahamis”Waxaa loola jeedaa sahanno cilmi baaris suuqa ah oo aan adiga kuu diyaarinay.
"Websaydhada Xisbiga Saddexaad”Waxaa loola jeedaa shabakadaha dayactirka iyo / ama ay ku shaqeeyaan dhinacyada saddexaad.
"User”Waxaa loola jeedaa adiga shaqsi ahaan markaad adeegsanayso Adeegga.
"Nuxurka Isticmaalaha”Waxaa loola jeedaa dhammaan waxyaabaha, agabka, macluumaadka, iyo faallooyinka aad isticmaaleyso, gelisay, dhajisay ama aad soo gudbisay ama Waxaan aruurineynaa markaad Adeegga isticmaaleyso, oo ay ku jiraan macluumaadka laga helo Adeegga Raadinta Xayeysiiska, sida xogta qaabka isticmaalka internetka.
"Waxaad","Naftaada","Your"Iyo"Adiga”Tixraac ahaan shaqsi ahaan.
"We","Us","Our"Iyo"Cint”Tixraac hay'ad iswiidhish ah Cint AB reg. maya. 556559-8769.
1. Ku-habboonaanta; Heshiis
Shuruudahaan iyo Shuruudahaan (hadda kadib "Shuruudaha”) Codso marka lagu daro heshiis kasta oo aad la gasho Mulkiilaha Guddi ee aad xubinta ka tahay, iyo sidoo kale shuruudo kasta oo gaar ah, oo dalban kara Sahan, Barnaamij Cilmi-baaris kale ama Adeeg kale. Shuruudahaan ma khuseeyaan illaa inta ay ka hor imaanayaan shuruudaha heshiiska u dhexeeya Adiga iyo Mulkiilaha Guddi ama shuruudo gaar ah oo ay bixiyaan Mulkiilaha Guddi ama Macmiil shuruud u ah kaqeybgalkaaga Daraasad ama Barnaamij Cilmi-baaris kale ah , si kastaba ha noqotee, in ereyada kale ee noocan ahi aysan yareyn doonin xuquuqdeena ama aysan kordhin doonin mas'uuliyaddayada lagu qeexay Shuruudahaan.
Ujeedada Shuruudaan ayaa ah in la dejiyo shuruudaha guud iyo xaaladaha Adeegsigaaga, oo ay ku jiraan Ka-qaybgalkaaga Daraasadaha, Guddiyada ama Barnaamijyada Cilmi-baarista kale.
Waxaan maareynaa xiriirka ka dhexeeya Mulkiilaha Daraasad iyo Milkiilaha Guddi waxaana ku shaqeyneynaa magaca Mulkiile Guddi. Waxaan sidoo kale nahay alaab-qeybiye, oo siiya fursado Xubnaha Gudiga, si ay uga qeyb qaataan Daraasadaha, Barnaamijyada kale ee Cilmi baarista iyo adeegsiga adeegyada kale.
Marka lagu daro tan kor ku xusan, Waxaan sidoo kale maamuli karnaa dhiirigelin. Faahfaahinta la xiriirta qorshaha dhiirigelinta waxaa laga heli karaa Shuruudahaan.
3. U-qalmitaanka Xubinnimada Guddiga
Xubinnimada gudigu guud ahaan waxay u furan tahay shakhsiyaadka qanciya shuruudaha xubinnimada, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, shuruudaha da'da ugu yar iyo shuruudaha goobta juqraafiyeed. Shuruudaha xubinnimada Guddigu way ku kala duwanaan karaan Guddi gaar ah waxaana go'aamiya Mulkiilaha Guddiga. Markaad ogolaato inaad xubin ka noqoto Guddi, Waxaad ogolaatay inaad hesho casuumaadyo aad kaga qaybgasho Daraasado, Barnaamijyo Cilmi-baaris ama Adeegyo kale, labadaba Mulkiilaha Guddi ee aad ka codsatay xubinnimada Guddiga iyo kuwa kale ee Mulkiileyaasha Guddiga ah. Waad ka bixi kartaa xubinnimada Guddiga wakhti kasta, fadlan eeg Qeybta 12 "Siyaasadda Ka Bixitaanka" hoosta.
Waxaan kaliya u oggolaaneynaa hal Xubin Guddi cinwaan kasta oo emayl u gaar ah Guddi kasta.
4. Diiwaangelinta Gudiga
Si aad u noqotid Xubin Guddi, Waa inaad iska diiwaangelisaa Goob Guddi ah oo aad bixisaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan Naftaada. Macluumaadka aad bixisay waa inay noqdaan run, sax oo dhameystiran. Waxaan xaq u leenahay inaan xadidno ama ka mamnuuco helitaankaaga Adeegga ama kaqeybgalka sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris ah haddii aad bixiso macluumaad, ama Waxaan haysannaa sabab aan uga shakinno in macluumaadka aad bixisay uusan ahayn mid run ah, sax ah oo dhameystiran.
Xubinnimada Guddigu waa mid shaqsiyadeed oo waxaa isticmaali kara oo keliya qofka iska diiwaangeliya xubinnimada Guddi. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad ilaaliso macluumaadka isticmaalaha iyo furaha sirta ah adiguna waxaad mas'uul ka tahay wax kasta oo adeegsi ah, ha ahaadeen kuwo la oggolaaday ama aan la oggolaan, ee xisaabtaada xubinnimada.
5. Shuruudaha Kaqeybgalka Sahanka, Barnaamijka Cilmi baarista Kale ama Adeegyada Kale
Markaad Kaqaybqaadato Sahan, Barnaamij kale oo Cilmi Baadhis ah ama Adeeg kale, iyo / ama aad u adeegsato Boggeena, Goob Daraasad ama Goob Guddi ah, Waxaa waajib kugu ah inaad u hogaansanaato Shuruudahaan, iyo sidoo kale wixii shuruudo iyo shuruudo kale ah kaqaybqaadashada, oo ay kujiraan wixii heshiis ah ee udhaxeeya Adiga iyo Mulkiilaha Guddi ama shuruudo uu adeegsado Macmiil ama Wadaag.
Markaad kaqeybqaadato Sahan, Barnaamij kale oo Cilmi baaris ah ama Adeeg kale, Waxaad ogolaatay inaad bixiso macluumaad run ah, sax ah oo dhameystiran oo ku saabsan Naftaada. Haddii aad bixiso macluumaad, ama Waxaan haysannaa sabab aan uga shakinno in macluumaadka aad bixisay uusan ahayn mid run ah, sax ah oo dhammaystiran, Waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin Daraasad, Barnaamij Cilmi-baaris kale ama Adeeg kale sidaa darteedna ma heli doonno wax dhiirrigelin ah Ka-qaybgalkaaga. Intaas waxaa sii dheer, Mulkiile Guddi ayaa laga yaabaa inuu ku joojiyo xubinnimadaada natiijada ah Inaadan awood u yeelan doonin inaad kaqeyb gasho baaritaanno ama barnaamijyo kale oo cilmi baaris ah.
Adiga ayaa mas'uul ka ah ficillada iyo isgaarsiinta la qabtay ama laga soo gudbiyey koontadaada.
6. Adeegsiga Adeegyada
Kaqaybqaadashada Sahan, Adeegga Cilmi baarista kale ama adeegsiga adeeg kale waa ikhtiyaari. Adeegyadu waa kuwo shaqsiyadeed, iyo kuwa aan ganacsi ahayn, isticmaal oo Waxaan xaq u leenahay inaan beddelno, wax ka beddelno, xakameyno ama ka horjoogsanno gelitaanka, dhammaan ama qayb ka mid ah Adeegyada, ogeysiis la'aan.
Waxaan markasta diidi karnaa inaanu u siino Adeegyada qofkasta oo ikhtiyaarkeena ah.
Waad qiraysaa inaad marin u heleyso, adeegsaneyso, iyo / ama aad ugaqeybqaadaneysid adeegyada kartida qandaraasle madax banaan, manajiraan wakaalado, shuraako, iskaashato wadajir ah, shaqaale-shaqo bixiyaha ama xiriirka franchisor-franchisee xiriirka loogu tala galay ama lagu abuuray Shuruudahaan.
7. Adeegsi aan la fasaxin
Waxaad ogolaatay inaadan:
(a) carqaladeyn, faragaliso amniga ama haddii kale ku xadgudub Adeegga ama Boggeena, Goob Daraasad, Bog Guddi ah, Goob Wadaag, ama adeeg kasta, agabyada nidaamka, xisaabaadka, server-yada ama shabakadaha ku xiran ama marin looga heli karo Sahan ama Bogga Sahanka ama goobaha ku xiran ama ku xiran;
(b) adeegso caarooyinka, aaladaha ama farsamooyinka macdanta macdanta kale si otomaatig ah u xajiso, u soo dejiso, u kaydiso, ama haddii kale u tarjunto ama u qaybiso xogta ama waxyaabaha laga heli karo ee la xiriira Adeegga, ama siyaabo kale u maareyn karto natiijada Daraasadda;
(c) qaado ficil kasta oo aad ku faragalineyso Boggeena, Goob Daraasad, Bog Guddi ah, ama Bog Wadaage ama adeegsiga shaqsi ee bogaggaas, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, rar xad dhaaf ah, ama "burburin" degel;
(d) diraan ama u gudbiyaan wixii fayras ah, xog khaldan, ama wixii kale oo waxyeello leh, khalkhal gelin kara, ama kharribaya, fayl, ama macluumaad ah, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, spyware, malware iyo trojans;
(e) uruuriyaan wixii Macluumaad Shakhsiyeed ah ee Isticmaalayaasha kale ee Adeegyada;
(f) dirto emayllada aan loo baahnayn, sida dallacaadaha iyo xayeysiinta alaabada ama adeegyada;
(g) furitaanka, adeegsiga, ama dayactirka in ka badan hal (1) koontada xubinnimada oo leh Guddi;
(h) isticmaasho ama isku daydo inaad isticmaasho koontada isticmaale kale, ogolaansho la'aan, ama sameysato koonto leh aqoonsi been abuur ah;
(i) isku day inaad ku hesho marin aan loo fasaxin oo ah Boggeena, Daraasad, Goob Daraasad, Bog Guddi ah, Goob Wadaag ama qaybo ka mid ah Daraasad, Boggeena, Goob Daraasad, Goob Guddi ama Goob Wadaag oo laga xaddiday marin guud;
(j) been abuurka ama waji-xirashada aqoonsigaaga dhabta ah;
(k) qaabeeyaan qayb (yada) Boggeena, Goob Daraasad, Goob Guddi ama Goob Wadaag ah oo ku muuji degel kale ama warbaahin ama wax ka beddel muuqaalka Goob kasta oo Sahan, Goob Guddi, ama Goob Wadaag;
(l) ka sameysano isku xirnaan degel illaa Boggeenna, Goob Daraasad, Goob Guddi ama Site Partner ama Adeegyada, iyadoon oggolaansho qoraal ah oo hore aan haysan;
(n) adeegso wax kasta oo xumaan ah; luqad aflagaado ah ama anshax xumo ah oo ku saabsan Boggeena, Daraasad ama Goob Daraasad, Bog Guddi ah ama Goob Wadaag ah;
(o) ku hawlan waxqabad been abuur ah, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, xawaareynta sahaminta, qaadashada isla Sahanka in ka badan hal jeer, gudbinta macluumaad been ah inta lagu guda jiro hawsha diiwaangelinta, gudbinta xogta Sahanka beenta ah ama aan runta ahayn, iibinta ama isku dayga in lagu soo qaab been ah ama khiyaamo ah, faragalinta Daraasadaha iyo, iyadoo la tixgelinayo adeegsiga Adeegga Raadinta Xayeysiiska, marin u helka degellada internetka ama ololeyaasha internetka iyadoo ujeedadu tahay oo keliya in la bixiyo aragti been abuur ah oo ku saabsan dhaqankaaga internetka;
) Sharciga Lagu Dabakhi Karo;
(q) ku lug lahaanshaha fal kasta ama fal dambiyeed ama sharci-darro ah oo lala xiriirin karo Boggeena, Daraasad ama Goob Daraasad, Goob Guddi ama Goob Wadaag;
(r) u isticmaal Mawduuca Xaddidan xadgudub ama jebinta Shuruudahaan; ama
(yada) ku dhiirrigeliyaan oo / ama kula taliyaan shaqsi kasta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, Xubnaha Guddiga, Ka-qaybgalayaasha ama mid ka mid ah shaqaalaheenna, inay ku kacaan fal khilaafsan Shuruudaha.
8. Mawduuc xaddidan
Haddii aan si kale loo qorin, dhammaan qalabka, oo ay ku jiraan, aan xad lahayn, dhammaan fikradaha, qoraalka, naqshadaha, sawirada, sawirro, sawirro, fiidiyowyo fiidiyoow ah, muusig iyo codad, iyo dhammaan calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeegga iyo magacyada ganacsiga ee loo adeegsaday Daraasad, Barnaamij kale oo Cilmi-baaris ah ama Adeeg kale iyo / ama Boggeena, Goob Daraasad, Goob Guddi ama Goob Wadaag iyo xulashadeeda iyo qaababkeeda, waxay ku xiran yihiin xuquuqda lahaanshaha aqooneed, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xuquuqda daabacaadda, calaamadaha ganacsiga iyo lahaanshaha ama xaq u lahaanshaha dalbashada diiwaangelintooda meel kasta oo adduunka ah, oo aan qabanno ama liisan siinno Annaga, Mulkiile Daraasad, Milkiile Guddi, Iskaashato, ama dhinacyo kale oo saddexaad oo ah milkiileyaasha milkiilayaasha, ama kontaroolada, Noocaas Xaddidan.
Markaad Adeeg isticmaasho ama aad kaqeybqaadato Sahan, Barnaamij kale oo Cilmi baaris ah ama Adeeg kale, Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto Mawduuc Xaddidan. Laguuma siinayo wax xuquuq ah Mawduuca Xaddidan oo dhammaan xuquuqda hantida aqooneed si cad ayaa loo dhowray. Ruqsad looma isticmaali karo, la muujin karo, la soo dejin karo, nuqul laga bixin karo, ama la soo saari karo (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn dhajinta degel kasta, baraha bulshada ama baloog) Mawduuca Xaddidan ama mawduuca ku saabsan Mawduucan Xaddidan adiga ayaa lagu siiyay. Fadlan waxaa lagugula talinayaa in tallaabo sharci ah laga qaadi karo haddii ay dhacdo adeegsi aan la oggolaan oo ah Mawduucyada Xaddidan ay adiga kugu soo noqonayso. Waxaa lagugula socodsiinayaa oo qirayaa inaan si buuxda ulashaqeyn doonno dhamaan codsiyada kooxda sadexaad siinta (oo ay kujirto laakiin aan kuxirnayn shaacinta aqoonsigaaga) ee laxiriira sheegashooyinka ah inaad isticmaashay Mawduuc Xaddidan xadgudub ku ah Shuruudahaan aan u aragno inay sharci yihiin.
Waxaad ka qayb geli kartaa oo keliya Sahanka, Barnaamijka kale ee Cilmi-baarista, Adeeg kale iyo / ama u adeegso Boggeena, Goob Daraasad, Goob Guddi, ama Bogga Wada-hawlgalayaasha qaab aan ku xadgudbeynin Annaga, ama dhinac saddexaad, hanti aqooneed xuquuqda.
9. Nuxurka Isticmaalaha
Adiga ayaa mas'uul ka ah dhammaan waxyaabaha ku jira Isticmaalaha. Adiga sidoo kale mas'uul ayaad ka tahay inaad hesho, halka ay khuseyso, oggolaanshaha dhinac saddexaad, oggolaanshaha, iyo / ama oggolaanshaha Adiga iyo Isticmaalka Mawduucaaga Isticmaalka. Mawduuca Isticmaalaha, oo ay ku jiraan sawirro, cod ama cajalado duubis ah ayaa loo qaadan karaa inay yihiin Xogta Shakhsiyeed. Mawduucaaga Isticmaalaha waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid si guud loo heli karo oo lala wadaagi karo dhinacyada saddexaad oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, Macaamiisheena, macaamiisha Macaamiisheena, Milkiileyaasha Sahanka, Milkiilayaasha Guddiga, Wada-hawlgalayaasha iyo bixiyeyaasha adeegga saddexaad. Waa inaad hubisaa in Mawduuca Isticmaalaha uusan ku jirin nuqul ama xuquuq ganacsi oo summad leh ama walxaha dhinac saddexaad ah, oo ay ku jiraan maqal, muuqaal, sawirro, ama u ekaanshaha qof aan adiga ahayn, illaa aad ka soo iibsato oggolaanshaha, oggolaanshaha iyo / ama oggolaanshaha sida qaybaha saddexaad ee looga baahan yahay Adiga iyo Isticmaalka Waxyaabaha Isticmaalaha Noocan ah. Maheli doontid magdhow adeegsiga Macaamiishayada, Macaamiisheena 'ama Macaamiishayada'.
Adoo adeegsanaya, soo dejinaya, soo dhajinaya, soo diraya ama noo oggolaanaya inaan soo aruurino (ogolaanshaha noocan ah ee loo arko in lagu siiyay ogolaanshahaaga Shuruudahaan iyo adeegsiga khuseeya) Mawduuca Isticmaalaha ee la xiriira Adeegyada, Waxaad halkan noogu siineysaa mid waara, oo aan laga noqon karin, aan xad lahayn , Wareejin, ruqsad-u-haysasho, adduunka oo dhan, boqortooyo bilaash ah, xaq iyo ruqsad si wax looga beddelo, loo nuqullo, loo gudbiyo, loo daabaco, loo muujiyo, loo abuuro shaqooyin kala-soocid ah, soo-saarid, wax ka beddelo, qaybiso, iyo haddii kale u adeegso Mawduuca Isticmaalahaaga si ikhtiyaarkeenna ah. Ma heli doontid wax magdhow ah Mawduucaaga Isticmaalaha ama Isticmaalkeenna, marka laga reebo halka si cad loogu heshiiyey.
Adiga kaliya ayaa mas'uul ka ah inaad hubiso in Mawduucaaga Isticmaalaha, iyo Adeegsiga aan u isticmaalno sida ku xusan Shuruudahaan, aysan ku xadgudbi doonin dhinacyada saddexaad ee xuquuqda lahaanshaha aqooneed. Ma yeeli karno mana dib u eegi karno dhammaan Mawduuca Isticmaalaha mana aqbalno wax masuuliyad ah haba yaraatee Mawduucaaga Isticmaalaha. Waxaan xaq u leenahay, laakiin waajib nagu ahayn, inaan tirtirno, ka saarno, ama aan tafatirno Mawduucaaga Isticmaalaha, kaasoo annaga, oo ah go'aankeenna keliya, aan u aragno: (a) ku xad gudubno Shuruudahaan; (b) ku xadgudbo xuquuqda lahaanshaha aqooneed; ama (c) aflagaado, sumcad xumo, fisqi, ama haddii kale aan la aqbali karin.
10. Siyaasad ku saabsan barnaamijyada dhiirrigelinta ee ku saleysan qodobbada
Haddii aad ka jawaabto oo aad si guul leh u dhammaystirto Daraasad, aad ka qaybgasho Barnaamij Cilmi-baaris kale ama Adeeg kale, Waad kasban kartaa dhibco, kuwaas oo lagu soo furan karo abaalmarinno kala duwan ama lacag caddaan ah barnaamijka dhiirrigelintayada. Ma aha inaad wax iibsato si aad dhibco u hesho. Dhibcaha aad kasbatay waa kuwo shaqsiyadeed umana wareejin kartid qof kale. Dhibcahaagu way ansax noqonayaan oo waa la iibsan karaa muddo dhan afar iyo labaatan (24) bilood ka dib markii koontadaadu hawlgasho. Dhibco kasta ama dhiirigelinno aadan iibsan adigu waad naga noqon kartaa annaga.
Bilowga Sahaminta, Barnaamijka kale ee Cilmi baarista ama Adeeg kale, Waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan tirada dhibcaha ee aad kasban karto. Ma aqbalno in aan masuul ka noqonno ama masuul ka noqonno si uun cawaaqib-xumo xagga canshuuraha ah ama waajibaadka ka dhalan kara dhibco ama dhiirrigelin la soo saaray ama la soo furtay. Haddii aad jebiso Shuruudaha Waxaa laga yaabaa inaad lumiso dhammaan dhibcaha ama dhiirigelinta aad kasbatay. Ma aqbalno wax masuuliyad ah oo adiga kugu saaran oo la xiriirta dhibcaha aad kasbatay.
11. Cusbooneysiinta Profile
Xubnaha Guddigu waxay isku raaceen inay cusbooneysiiyaan astaamaha xubinnimadooda. Xubin Guddi waa cusbooneysiin kartaa, saxi kartaa, iyo / ama tirtiri kartaa macluumaadka ku jira astaamaheeda xubinnimo iyadoo: (a) marin u heleysa koontadiisa xubinnimada Guddiga; ama (b) u dirista emaylka kooxda adeegga xubinta ee ku habboon Guddiga loo xilsaaray.
12. Siyaasadda Ka Bixitaanka
Xubnaha Guddigu way ka bixi karaan adeegsiga ama dhammaan Adeegyada (oo ay ku jiraan, iyada oo aan xad lahayn, ka helitaanka casuumaadaha sahaminta, joornaalada ama isgaarsiinta) wakhti kasta iyadoo: (a) la raacayo nidaamyada ka-saarista liis garaynta ee lagu sharraxay Bogga Guddi ee khuseeya ama goobaha la xiriira ama ay ku jiraan emayl naga soo gaadhay; ama (b) adoo u diraya emayl kooxdayada Adeegyada Xubnaha halkan
Waxaan u adeegsan doonnaa dadaal macquul ah, sida sharciga ama qaanuunka noogu baahan yahay, si aan uga jawaabno codsi kasta oo emayl ah muddo macquul ah gudahood ka dib helitaanka. Markay Joojiso Adeegyada, Macluumaadka xiriirka Xubin Guddi ah ayaa laga saari doonaa dhammaan isgaarsiinta ama liisaska xiriirka ee la xiriira Adeegyada (yada) la joojiyay. Fadlan la soco in ay qaadan karto dhowr maalmood in lagu dhammaystiro ka saarista iyo inta lagu jiro waqtigaas, Waxaad naga heli kartaa farriimo naga soo gaadhay kuwaas oo la abuuray ama la soo ururiyey ka-hor Bixitaankaaga.
Iyada oo la xiriirta Adeegsigaaga Adeegga, Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad isku xirto ama aad ku xirto Websaydh Dhinac Saddexaad ah Fadlan ogow inaannaan taageerin Websaydh dhinac saddexaad ah ama alaabooyin, adeegyo, iyo / ama fursado la xayeysiiyay, la bixiyay, iyada oo loo marayo ama la xidhiidha Website-ka Saddexaad ee Noocan ah. Fadlan dib u eeg dhammaan siyaasadaha iyo shuruudaha lagu dabaqi karo degellada websaydhka ah ee saddexaad.
14. Isgaarsiinta nala
Dhammaan isgaarsiinta (marka laga reebo Xogta Shakhsi ahaaneed) iyo Mawduuca Isticmaalaha aad soo gudbisay ama aad adigu noogu gudbisay, boostada elektaroonigga ah ama haddii kale, ama haddii kale annaga oo aan soo ururinay, waxaa loola dhaqmi doonaa sidii macluumaad aan qarsoodi ahayn oo aan lahaansho lahayn oo adiga ah, haddii aadan si gaar ah u tilmaamin midkood kahor, ama si kumeelgaar ah ula, Soo gudbintaada ama ogolaanshahaaga annaga si aan u ururino isgaarsiinta noocaas ah iyo Mawduuca Isticmaalaha. Waxaad ku raacsan tahay in wixii isgaarsiin ah iyo Mawduucyada Isticmaalaha ah aan u isticmaali karno annaga oo ku kalsoon go'aankeenna.
Markii aad codsaneysid xubinnimada Guddiga, adoo adeegsanaya Adeeg ama haddii kale nalala xiriiraya Annaga ama Mulkiile Guddi, Xogta Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan waa laga shaqeyn karaa. Macluumaadka ku saabsan dhaqamada gaarka ah ee Cint iyo ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, fadlan dib u eeg Ogaysiiska Asturnaanta Kaqeybgalaha Cilmibaarista halkan.
Waxaad si cad u oggoshahay in Kaqeybgalkaaga Sahan, Barnaamij kale oo Cilmi baaris ah iyo adeegsiga Adeegga iyo daalacashada degelkeenna, Goobta Daraasada, Goob Guddi ama Goob Wadaag ay ku jirto halistaada iyo mas'uuliyaddaada keliya. Ilaa iyo inta sharcigu oggol yahay, Annaga, Macaamiishayada, Milkiileyaasha Daraasadda, Mulkiileyaasha Guddiga, Wada-hawlgalayaasha, ama dhinacyo kale oo saddexaad, iyo annaga iyo agaasimayaashooda, saraakiisha, shaqaalaha, wakiillada, wakiillada, bixiyeyaasha mawduucyada saddexaad iyo shati-bixiyeyaasha. ha sameynin wax damaanad qaad ah, oo qeexan, si maldahan ama sharci ah, oo ay kujiraan kuwa baayacmushtarka, u qalmid ujeedo gaar ah, kaqeybgalka Sahan ama isticmaalka Adeegga, Boggeena, Goob Sahan, Goob Guddi, ama Goob Wadaag noqo mid aan kala go 'lahayn ama qalad lahayn. Ilaa xadka ugu badan ee sharcigu oggol yahay, Annaga, Macaamiishayada, Milkiileyaasha Daraasadda, Mulkiileyaasha Guddiga, Wada-hawlgalayaasha, ama dhinacyo kale oo saddexaad, iyo annaga iyo agaasimayaashooda, saraakiisha, shaqaalaha, wakiillada, wakiillada, bixiyeyaasha mawduucyada saddexaad iyo shati-bixiyeyaasha, ha sameynin wax damaanad qaad ah, oo qeexan, si maldahan ama sharci ah, oo ay kujiraan kuwa baayacmushtarka, u qalmid ujeedo gaar ah, saxsanaanta, kalsoonida, ama waxyaabaha kujira macluumaad kasta, ama adeegyada lagu bixiyo Daraasad ama Boggeena, Goob Daraasad, Guddi Goob, ama Goob Wadaag, marka laga reebo sida si cad loogu qeexay Shuruudahaan.
17. Xaddidaadda Mas'uuliyadda
WAQTIGA WAQTIGA AH EE SHARCIYADA LAGU OGGOL YAHAY, ANAGU, MADAXDA LEH INTA SAYBADA, MAGAALAYAASHA PANEL AMA SHAQAALAYAASHA, SADDEX XISBIGA, AMA AGAASIMAYAASHA, SHAQAALAYAASHA, SHAQAALAYAASHA, WAKIILADAYAASHA LACAG LA'AAN AH , SHAQO KASTA OO LA XIRIIRSAN SHARCIYADAAN, ADEEGA, GOOBTEENA, BADBAADADA, SOO BANDHIGTA QALABKA, SHAQAALAHA SHAQAALAHA AMA SHAQO KASTA OO AAD SAMEYSAAN, AMA QOF KASTA OO AQOON LEH, GAAR AH, MUHIIM AH, KHUDBAD, MUHIIM, QASAARAHA, LACAGAHA LACAGAHA, KHARASHKA Kaydinta lafilayo, AMA QAAR KASTA OO KHATAR AH OO AAN toos ahayn, HAL AMA AANAN LOOGU TALAGALAY LIKELIHOOD AMA AAD UTALIMAAHI KHATARTAAN.
Xaddidaadda mas'uuliyadda iyo afeefidda Shuruudahaan ayaa la adeegsan doonaa iyadoo aan loo eegin nooca ficil ahaan, ha ahaato qandaraas, dammaanad, qayaxan, qayaan-goosad, mas'uuliyad adag, dayacaad ama jirdil kale waxayna ka badbaadi doontaa jebinta aasaasiga ah ama jebinta ama ku guuldareysiga ujeedada lama huraanka ah ee qandaraaska ama ku guuldareysiga daaweynta khaaska ah.
18. Bixin la’aan
Waxaad ogolaatay inaad si buuxda oo wax ku ool ah u xaqdhawdo, u difaacdo, oo aad noo haysato, Mulkiileyaasha Sahanka, Milkiileyaasha Guddi, iyo Wada-hawlgalayaasha, iyo dhinacyada kale ee la xiriira, oo ay ku jiraan agaasimayaasha, saraakiisha, saamilayda, shaqaalaha, wakiillada, qandaraasleyda, la-hawlgalayaasha, ku-xigeennada ama wakiillada, aan dhib lahayn iyo ka soo horjeedka dhammaan iyo dhammaan waxyeelooyinka, kharashyada, deymaha iyo khasaaraha nooc kasta ha ahaadee, oo ay ku jiraan khidmadaha sharciga, ee ka dhasha, ha ahaato si toos ah ama si aan toos ahayn, jebin kasta oo aad keento Adiga Shuruudaha.
Waxaan halkan ku xafideynaa xaqeena, go'aankeena kaliya, inaan isbedel ku sameyno Shuruudahaan. Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad dib u eegis ku sameyso Shuruudahaan si joogto ah. Waxaan heli doonaa ogolaanshahaaga kahor isbeddelada nooca noocaas ah ee oggolaanshaha loo baahan yahay ama loo baahan yahay. Isbedelada aan u baahnayn ogolaanshaha, sii wadida adeegsigaaga, helitaanka iyo / ama kaqeybgalka Adeegyada ayaa sameyn doonta oo ka dhignaan doonta aqbalaada Shuruudahaan markii wax laga beddelay.
20. U hogaansanaanta Sharciga lagu dabaqi karo
Waad qiraysaa oo aad ogolaatay inaad marwalba u hogaansanaato Sharciga Khuseeya markaad kajawaabto Sahan, aad kaqaybqaadato barnaamij kale oo cilmi baaris ah ama aad adeegsanayso Adeegga.
21. Hakinta, Joojinta iyo Ka-hawlgelinta
Waxa intaa dheer in kasta iyo dhammaan daawooyinka kale ee la heli karo, Waxaa laga yaabaa inaan, ogeysiis la'aan, joojinno iyo / ama joojinno Adeegsigaaga iyo marin u helidda Adeegga, ama xubinnimadaada Guddi, haddii aad jebiso shuruudahaan ama haddii ay dhacdo Waxaad Adeegga ugu adeegsaneysaa qaab sharci darro ah ama haddii kale waxaad u dhaqmeysaa qaab ku habboon, annaga oo ku tashan karna, aan la aqbali karin Annaga, Mulkiilaha Daraasadda, Milkiilaha Guddiga, ama Iskaashatada. Haddii Aan joojinno Xaqa aad u leedahay inaad Adeegga adeegsato iyo / ama haddii xubinnimadaada Guddi loo joojiyo: (a) Waxaad luminaysaa dhammaan xuquuqaha, cinwaanka, iyo xiisaha aad u leedahay iyo / ama dhammaan abaal-marinnada aan la qiimeynin, dhiirrigelinta, iyo / ama abaalmarinta, oo waxtar leh marka la joojiyo ; (b) Xubinnimadaada Guddi waa isla markiiba la joojinayaa; (c) Helitaankaaga iyo adeegsiga Adeeggu isla markiiba wuu joogsan doonaa; iyo (d) Looma oggolaan doono inaad kaqeybqaadato cilmi-baarisyada mustaqbalka ee lagu bixiyo Adeegga.
Intaas waxaa sii dheer, Waxaan xaq u leenahay inaan dib-u-kicino koontadaada xubinimada Gudiga: (a) haddii aadan hadda aheyn xubin firfircoon; (b) haddii aan ka helno boodbood adag ama ogeysiiska guuldarrada dirista ee xiriirkeena e-mayl ee lala xiriirinayo xisaabtaada emaylka; ama (c) haddii aan helno "sanduuq buuxa" ogeysiis jawaab celin ah seddex (3) jeer oo ku saabsan xiriirkeena e-mayl ee koontadaada emaylka.
Haddii ay dhacdo in ficil la gooyo, lagaa joojiyo Adiga, ama nala joojiyo annaga, waad lumineysaa wax dhiirrigelin ah oo aad kasbatay.
22. Qabsashada iyo Meeleynta
Haddii, sabab kasta ha noqotee, xilli kasta ama bixinta Shuruudahaan loo arko inay yihiin wax aan waxba ka jirin ama aan la fulin karin, muddadaas ama bixintaas waxaa loo qaadan doonaa inay ka go'i karto inta ka hartay Shuruudahaan, iyo inta ka hartay Shuruudahaan waa la macneyn doonaa oo la fasirayaa iyada oo aan la tixraacin ereyga aan la fulin karin.
Ma ku wareejin kartid Shuruudaan iyada oo aan ogolaansho qoraal ah oo hore aan haysan, kaas oo lagu joojin karo ikhtiyaarkeenna keliya. Waad oggoshahay inaanu ku wareejin karno Shuruudahaan waqti kasta cid kasta.
23. Sharciga Xukunka, Xukunka iyo Goobta Sharciga ah
Wixii khilaafaad ah ee ka dhasha ama la xiriira Shuruudaan, oo ay ku jiraan wixii su'aalo ah ee la xiriira jiritaankeeda, ansaxnimadeeda ama joojinta, waxaa loo gudbin doonaa maxkamada gobolka Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) oo lagu xukumi doono laguna dhisi doono si waafaqsan sharciyada Sweden, iyada oo aan la tixraaco xulasho kasta oo mabaadi'da sharciga ah (ha ahaato kuwa Iswiidhan ama awood kale) oo laga yaabo inay bixiso dalab sharci kale oo sharciyeed.
Ogeysiiska Asturnaanta Kaqeybgalaha Kaqeybgalaha Cilmibaarista Cint
Ogeysiiskaan Asturnaanta wuxuu qeexayaa sida ay Cint AB ("Cint") u isticmaasho (uruuriso, u kaydiso, u isticmaasho una siideyso iyo haddii kaleba u isticmaasho) Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed ("Xogta Shakhsiyeed" oo sidoo kale loo gudbin karo macluumaad Shakhsi ahaan Lagu Garan Karo ama "PII") iyo kuwo kale macluumaadka lagu sharaxay Ogeysiiskan Asturnaanta haddii aad xubin ka tahay guddi ("Xubin Guddi") ee guddi uu leeyahay mid ka mid ah Mulkiileyaashayada Guddiga ("Milkiileyaasha Guddiga") ama aad tahay kaqeybgale ("Kaqeybqaataha") oo lagu jiheeyey sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris ah oo ka socda mid ka mid ah macaamiisheena ("Macaamiisha") ama Wada-hawlgalayaasha ("Wada-hawlgalayaasha"). Kaqeybgalkaaga sidoo kale waxaa xukumi kara ogeysiiska asturnaanta ee mid kamid ah Milkiileyaashayada Gudiga.
Cint waxaa lagu aasaasay Midowga Yurub macluumaadka ku jira Ogeysiiskan Asturnaanta wuxuu ku saleysan yahay Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee Midowga Yurub (2016/679) ama GDPR, kaas oo bixiya heer sare marka loo eego ilaalinta Xogta Shakhsiyeed. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay meesha aad ku nooshahay, sharciyada kale ee asturnaanta iyo qawaaniinta ayaa sidoo kale la adeegsan karaa. Ogeysiiska Asturnaantaani wuxuu khuseeyaa degganeyaasha waddan kasta oo adduunka ah.
Cint wuxuu sameyn doonaa, una sababi doonaa la-hawlgalayaasheeda inay, aasaasaan oo ay ilaaliyaan habraacyada ganacsiga ee la jaan qaadaya Ogeysiiska Asturnaanta.
WAA MAXAY JINSIGU?
Cint waxay bixisaa cilmi baaris caalami ah oo caalami ah iyo aragtiyo isku xira Mulkiilayaasha Guddi baarayaasha suuqyada, magacyada iyo Xubnaha Guddiga iyo kaqeybgalayaasha cilmibaarista wadaagista fikradaha iyo xogta macaamiisha. Cint oo xarunteedu tahay Stockholm, Sweden, Cint waxay xafiisyo ku leedahay magaalooyin waaweyn oo ku yaal Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya-Baasifigga.
Shakhsiyaadka waxay kaqeybqaataan cilmi baarista suuqa ee ku saabsan barnaamijka 'Cint platform' iyada oo loo marayo xubinnimada koox ka mid ah Milkiileyaashayada Guddiyada ama mid ka mid ah Wada-hawlgalayaashayada oo ku hagaya Ka-qaybgalayaasha sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris ah. Xubnaha Gudiga iyo Kaqeybgalayaashu waxay kaqeybqaataan sahan ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa si ay fursad ugu helaan una soo furtaan abaalmarinta iyo dhiirigelinta kaqeybgalkooda.
Milkiilayaasha Gudiga Cint iyo Wada-hawlgalayaasha jiheeya ka-qaybgalayaasha sahaminta ama barnaamijyada kale ee cilmi-baarista ee suuqa waa Maamulayaasha Xogta ee go'aamiya ujeeddooyinka iyo hababka loo adeegsado Xogta Qofka. Cint waxay kaliya ka shaqeeyn doontaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed iyadoo u shaqeyneysa sida Nidaam Nidaamiyaha Xogta, markay codsato Maamulaha Xogta.
Macluumaadkaaga Shakhsiyeed waxaa loo isticmaali karaa dhowr ujeeddo oo hoos lagu sharraxay oo ay la socdaan tusaalooyin qaybaha macluumaadka shakhsiyeed ee ujeeddo kasta. Faahfaahin gaar ah oo ku saabsan adeegsiga macluumaadka shakhsi ahaaneed ayaa sidoo kale lagu sharxi karaa inta lagu jiro sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah marwalba waa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto sida lagu sharraxay "NALA SOO XIRIIR" qaybta hoose.
FILIMADA AYAA ILAALINAYA QARSOONIMADAADA
Diiwaangelinta iyo kaqeybgalka guddi uu iska leeyahay mid ka mid ah Mulkiileyaashayada Guddi waxay ku xiran tahay Shuruudaha iyo Xaaladaha Cint. Waxaad ka heli kartaa Shuruudaha iyo Xaaladaha Cint halkan.
Kaqeybgalkaaga sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah gabi ahaanba waa ikhtiyaari oo isticmaalka Cint ee Xogtaada Shakhsiyeed waxaa lagu fuliyaa ogolaanshahaaga. Baadhitaannada iyo barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa ee ay maamulaan Macaamiisha Cint, Wada-hawlgalayaasha ama dhinacyo kale oo saddexaad iyo xogta la soo ururiyey ee la xiriirta sahannadaas iyo barnaamijyada kale ee cilmi-baarista suuqa kuma xirna Ogeysiiskan Asturnaanta.
Cint waxaa ka go'an ilaalinta asturnaanta Xogta Shakhsiyeed. Cint waxay ku dadaaleysaa inay waafajiso dhaqankeeda asturnaanta sharciyada, xeerarka, iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo, iyo xeerarka heerarka suuqyada la adeegsan karo iyo ururada cilmi baarista ra'yi ururinta, oo ay ku jiraan, iyadoon xadidnayn ESOMAR (www.esomar.org) iyo Ururka Fahanka (www.insightsassociation.org).
SIDEE LOO SAMEEYAY XOGTAADA QOFKA AH?
Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed waxaa had iyo jeer loo ururin doonaa hab cadaalad ah oo xalaal ah, ujeedooyin gaar ah. Tusaale ahaan, Cint wuxuu ururin karaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed markii aad iska diiwaangeliso ama aad ka qaybgasho guddi ka mid ah Mulkiileyaashayada Guddi, dhammaystiraan sahaminta, ka qaybqaadashada barnaamij kale oo cilmi baaris suuq ah ama qaab iswada ama qaabab kale sida lagu sharraxay “WAA MAXAY MACLUUMAADKA AY SOO QAADANAYO FARSAMADA LOOGU TALAGALAY?” qaybta hoose.
Cint kaliya waxay aruurisaa Macluumaadka Shakhsiyeed ujeedooyinka cilmi baarista suuqa.
WAA MAXAY MACLUUMAADKA SHAKHSIGA AH EE LA SOO URUURAY OO LAGU QAABILAY?
Xogta Shakhsiyeed ee la shaqeynayo waxaa ku jiri kara magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka emaylka, taariikhda dhalashada, iyo macluumaadka kale ee la midka ah. Macluumaadku si toos ah ayey kaaga soo qaadan karaan Xogta Shakhsi ahaaneed markaad si iskood ah u siiso Cint ama Cint waxay ka heli kartaa Xogta Shakhsiyeed Milkiilayaasha Guddigeenna, Macaamiisha ama shirkadaha cilmi baarista suuqa ee helay oggolaanshaha Ka-qaybgalaha. Xubnaha Guddi ee koox ka mid ah Mulkiileyaashayada Guddiga, Cint waxay ururin doontaa xogta iyadoo la raacayo tilmaamahooda.
Cint sidoo kale waxay ka heli kartaa Xogta Shakhsiyeed milkiilayaasha keydka macluumaadka kuwaas oo noo xaqiijiyay in keydkooda keydku ay kakooban yihiin oo keliya shakhsiyaad ogolaaday in lagu daro oo lala wadaago Macluumaadkooda Shakhsiyeed. Ugu dambeyntiina, Cint wuxuu aruurin karaa oo isticmaali karaa Xogta Shakhsiyeed ee laga helo ilaha dadweynaha laga heli karo, sida tusaha taleefannada.
Waqti ka waqti Cint waxay ururin kartaa Xogta Xasaasiga ah ee Shakhsiyeed taas oo ku xidhan waddanka aad ku nooshahay ay ku jiri karaan, isir ama jinsi asal ahaan, diiwaannada caafimaadka, macluumaadka dhaqaalaha, fikradaha siyaasadeed iyo fikradaha diimeed ama falsafadeed. Haddii Cint ay soo ururiso Macluumaadkaaga Xasaasiga ah ee Shakhsiyeed, Cint marwalba way heli doontaa oggolaanshahaaga cad.
Waxaad sidoo kale soo gudbin kartaa, gudbin kartaa ama gudbin kartaa waxyaabaha ama waxyaabaha, oo ay ku jiraan sawirro, fiidiyowyo, iyo / ama waxyaabo kale oo la mid ah ama la xiriira ama walxo ay ka mid noqon karaan Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed, tusaale ahaan, marka aad ka qeyb qaadaneyso sahannada ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista ee suuqa. Macluumaadka noocan ah ee Shakhsiyeed waa la isticmaali karaa loona siidayn karaa sida lagu sharaxay Ogaysiiska Asturnaanta waana inaysan ku jirin maqal, muuqaal, muuqaallo, ama u ekaanshaha qof aan adiga ahayn.
SIDEE LOO SAMEEYAA OO LOO QAABEEYAY XOGTA QOFKA?
Cint ayaa laga yaabaa inay ururiso oo ay ka shaqeyso Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed sababo kala duwan awgood, oo ay ka mid yihiin:
awood u siiso kaqeybgalkaaga mid ka mid ah Milkiileyaashayada Guddi;
ururiyaan macluumaadka ku saabsan adiga si Cint ay si fiican kuugu bartilmaameedsan karto baaritaanno gaar ah iyo barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa;
kula soo xiriiri doono si aan kuugu casuumo kaqaybqaadashada sahaminta ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa;
cusbooneysii diiwaankeena macluumaadkaaga shaqsiyeed;
maaraynno barnaamijyadeenna dhiirrigelinta ah oo aan fulinno codsiyadaada dhiirrigelinta noocaas ah;
kuu ogolaanayaa inaad kaqeyb gasho xaaqida (haddii loo oggol yahay);
inaad ka jawaabto wixii fariimo ah ama codsi ah ee aad noo soo diri karto;
ansaxiyaan macluumaadkaaga faahfaahinta ama jawaabaha aad siisay sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah;
ku siiyo adeeg iyo taageero;
ogaado oo ka hortagno ku xadgudubka Shuruudahayaga & Shuruudaha;
in la baaro falalka musuqmaasuq ee la tuhunsan yahay ama ku xadgudubka xuquuqda dhinac kale;
in laga jawaabo codsiyada macluumaadka sharciyeysan ee maamulka dawlada ama meeshii sharcigu u baahan yahay;
la xiriirta iibinta, meeleynta, ama wareejinta kale ee ganacsigeena, taas oo ay jirto Cint waxay sameyn doontaa dadaal ganacsi oo macquul ah si loo hubiyo in iibsade kasta oo noocaas ah uu ogolaado inuu kula dhaqmo Xogta Shakhsi ahaaneed sida ku xusan Ogeysiiska Asturnaanta; ama
sida aad adigu u fasaxday.
Fadlan ogow in helitaanka isgaarsiinta emaylku ay noqon karto shuruud ah kaqeybgalkaaga sahankeena ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa. Waad ka bixi kartaa helitaanka emaylladan adoo ka saaraya sahaminta ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa.
Cint marwalba wuxuu hubiyaa in loo oggol yahay ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Cint guud ahaan tan waxay ku sameysaa iyada oo la helo ogolaanshahaaga, hase yeeshe kiisaska xaddidan, Cint waxay u adeegsan kartaa xaalad qaanuuneed si ay uga shaqeyso Xogta Shakhsiyeed.
Haddii xaalad qaanuuni ah ay khuseyso u oggolaaneysa Cint inay ka shaqeyso Macluumaadkaaga Shakhsiyeed oo aad ka laabato oggolaanshaha inaad ku shaqeyso Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed taas macnaheedu maahan inay Cint joojinayso ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sida laga yaabo inay tusaale ahaan u hoos timaado waajibaad sharci ah inay sii wadato socodsiinta macluumaadkaaga shaqsiyeed ujeeddooyinka qaarkood, tusaale ahaan inaad nuqulada macaamil ganacsi haysato ugu yaraan toddobo sano.
WAA MAXAY MACLUUMAADKA AY QAADANAYAAN FARSAMOOYINKA LOOGU TALAGALAY?
Cint ayaa laga yaabaa inay si toos ah u ururiso macluumaadka qaarkood. Waxay kuxirantahay wadanka aad ku nooshahay, macluumaadka noocan oo kale ah waxaa loo qaadan karaa inay yihiin Xogta Shakhsiyeed. Macluumaadka noocan ah waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn macluumaadka ku saabsan qalabkaaga iyo awoodaha qalabka oo ay ku jiraan, laakiin aan xad lahayn, nidaamka qalliinka qalabka, barnaamijyada kale ee qalabkaaga, macluumaadka cookie, cinwaanka IP, adeeg bixiyaha shabakadda, nooca qalabka, aagga waqtiga, xaaladda network, nooca biraawsarka, aqoonsi biraawsarka, nambarka aqoonsiga aalad gaar ah (sida Aqoonsiyaasha loogu talagalay falanqaynta ama xayeysiinta), Aqoonsiga adeegsadaha bixiyaha shabakadda (lambar si gaar ah ay kuugu siisay bixiyahaaga shabakadda), Cinwaanka Helitaanka Warbaahinta (MAC) cinwaanka, xayeysiinta moobiilka aqoonsi, goob iyo macluumaad kale oo keligood ama isku darka loo isticmaali karo in si gaar ah loogu aqoonsado aaladdaada. Tiknoolajiyad gaar ah ayaa lagu qeexay hoos:
Cookie waa fure yar oo qoraal ah oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan isticmaalaha oo ay soo dhigeyso degel degelka kombiyuutarka ama qalabka isticmaalaha. Cint wuxuu dhigaa cookies-ka kumbuyuutarkaaga ama aaladdaada si loogu sameeyo sahan iyo barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa iyo ujeedooyinka kahortagga khiyaanada.
Cint sidoo kale waxay isticmaali kartaa raadinta cookies, tags, iyo qoraallo si ay ula socoto macluumaadka qaaska ah ee adiga kugu saabsan iyada oo ku saleysan waxqabadkaaga boggayaga ama bogagga kooxda saddexaad. Cint waxay u adeegsan kartaa macluumaadkan si ay u go'aamiso haddii aad aragtay, aad riixday, ama haddii kale aad la macaamishay xayeysiis ama xayeysiin ay Cint ka shaqeyneyso si ay uga caawiso qiimeynta mid ka mid ah Macaamiishayada cilmi-baarista. Iyada oo ku xidhan ogolaanshahaaga, Cint sidoo kale waxay kuu dooran kartaa baadhitaan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah halkaas oo loo adeegsan doono cookies si loogu muujiyo adiga xayeysiin gaar ah ama dallacsiin ka hor sahaminta ama waxqabadka kale ee barnaamijka cilmi baarista suuqa ee qiimeynta xayeysiinta gaarka ah ama dallacaadaha.
Oggolaanshahaaga, Macaamiisha Cint ama Wada-hawlgalayaasha sidoo kale waxay ku dhejin karaan buskudka kumbuyuutarkaaga ama aaladda waxayna u isticmaali karaan buskudyadaas, sumadaha iyo qoraallada si ay ula socdaan macluumaad gaar ah oo ku saabsan waxqabadkaaga bogagga internetka qaarkood. Macaamiisha Cint ama Wada-hawlgalayaasha ayaa u isticmaali kara macluumaadkan nashaadaadyo cilmi baaris kala duwan oo suuqa ah.
Hadaad rabto, waad dooran kartaa inaadan u oggolaan cookies ama dooran inaad aqbasho cookies adoo hagaajinaya goobaha asturnaanta biraawsarkaaga si aad u tirtirto kukiyada markaad ka baxdo bogagga internetka ama markaad xirto biraawsarkaaga. Waxa kale oo aad u habeyn kartaa biraawsarkaaga inuu joojiyo cookies. Ma bixinayo ogolaansho, tirtirka cookies ama xannibida cookies ayaa kaa reebi kara kaqeybgalka sahaminta ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa ama saameyn taban ku yeelan kara khibradaada isticmaale. Macluumaadka ku saabsan sida looga baxo cookies-ka fadlan tixraac qaybta cinwaankeedu yahay SIDEE AYAAN U XULTAA?
Isticmaalka 'Cint' ee buskudka had iyo jeer waa ogolaanshahaaga.
Hadaad rabto inaad waxbadan kabarato cookies-ka ay adeegsato Cint, fadlan dhagsii halkan.
Aqoonsi Xayeysiinta Mobilada:
Aqoonsiga xayeysiinta moobiilku waa xargaha nambarada iyo xarfaha lagu aqoonsado casriga casriga ah ama kaniiniga. On macruufka ah, aqoonsiga xayeysiinta moobiilka waxaa loo yaqaan "Aqoonsiga Xayeysiiyayaasha" (IDFA, ama IFA marka la soo gaabiyo). On Android, aqoonsiga xayeysiinta moobilka waa GPS ADID (ama Aqoonsiga Adeegyada Google ee loogu talagalay Android). Cint waxay aruurin kartaa aqoonsiyo xayeysiis moobiil ah ama waxay ka heli kartaa Wada-hawlgalayaasha. Cint waxay u adeegsan kartaa aqoonsiyeyaasha xayeysiinta moobiilka barnaamijyadeenna cilmi baarista ee suuqa ama si ay ula wadaagaan xogtaada Macaamiisha ama Wada-hawlgalayaasha. Iyada oo ku xidhan ogolaanshahaaga, Cint sidoo kale waxay kuu dooran kartaa sahamin ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah halkaas oo aqoonsiyo xayaysiis moobiil ah loo adeegsan doono inay kugu soo bandhigaan xayeysiin gaar ah ama dallacsiin ka hor sahaminta ama waxqabadka barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa ee qiimeynta xayeysiinta gaarka ah dallacsiinta.
Cint waxay uruurin doontaa ama heli doontaa aqoonsi xayeysiis moobiil ah oo keliya oggolaanshahaaga.
Aaladaha shabakadda (sidoo kale loo yaqaan tag, gif saafi ah ama 1 × 1 pixel) waxay ka kooban tahay xarig yar oo koodh ah oo ku dhex jira bog internet ama emayl. Waxay noqon karaan ama aysan noqon karin sawir muuqaal ah oo muuqaal ah oo lala xiriiriyo nalka shabakadda, badanaana sawirka waxaa loogu talagalay inuu ku dhex milmo asalka bogga ama emaylka.
Cint wuxuu u adeegsan karaa shuruudo shabakadeed farriimaha emaylkeena si aan u caawino go'aaminta in fariimaheena la furay iyo in la hubiyo wixii qasabno ah iyadoo la adeegsanayo xiriiriyeyaasha ku jira emaylka ama xayeysiinta ama baaritaanka websaydhka si loo go'aamiyo haddii Ka-qaybgalaha uu eegay xayeysiis ama waxyaabaha kale ee khadka tooska ah ee Cint cabbirayo. . Cint iyo wakiiladeena idman waxay isku xiri karaan Xogta Shakhsiyeed iyo shumaca shabakadaha ujeeddooyin howleed iyo cilmi baaris.
Cint ayaa laga yaabaa inay ka soo ururiso macluumaadka joornaalka kombuyuutarkaaga ama aaladdaada. Cint waxay u adeegsan kartaa xogtaada joqoraafi ahaan kahortagga khayaanada ama ujeedooyin cilmi baaris suuqa ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn cilmi-baarista xayeysiinta ama waxqabadyada kale ee cilmi-baarista suuqa ku saleysan raadraaca. Cint waxay heli doontaa ogolaanshahaaga haddii Cint ay uruuriso ama isticmaasho macluumaadkaaga joqraafiga ah.
Faraha Dijitaalka ah:
Cint wuxuu adeegsan karaa tikniyoolajiyada faraha digital si ay u ururiso xog gaar ah oo adiga iyo / ama kombiyuutarkaaga ama aaladdaada ah. Xogtaan waxaa ka mid noqon kara Macluumaadka Shakhsi ahaaneed sida cinwaanka IP-ga, iyo sidoo kale Xogta aan shaqsiga ahayn sida kombiyuutarka nidaamka hawlgalka ama nambarka nooca biraawsarka. Teknolojiyadaani waxay abuureysaa aqoonsi kumbuyuutar oo u gaar ah oo loo isticmaali karo kahortaga khayaanada ama si loo aqoonsado oo loola socdo kaqeybgalkaaga sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah iyo xaddididda kaqeybgalka iyadoo la raacayo shuruudaha sahan gaar ah ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah.
Macluumaadka Warbaahinta Bulshada:
Waxa kale oo lagu siin karaa fursad aad kaga qaybgasho sahannada iyo barnaamijyada kale ee cilmi-baarista suuqa iyada oo loo marayo ama lagu marinkaro baraha bulshada. Haddii aad dooratid inaad kaqeybqaadatid sahan ama barnaamijyo kale oo cilmi baaris suuqa ah adoo adeegsanaya ama la socda baraha bulshada, Cint waxaa laga yaabaa, adigoo raalli ka ah, inay soo uruuriso macluumaad cayiman oo ku kaydsan koontadaada baraha bulshada.
Cint si otomaatig ah ayey u ururisaa oo u kaydisaa macluumaadka qaarkood inta lagu jiro sahaminta iyo ka-qaybgalka barnaamijka cilmi-baarista kale ee suuqa. Adeegyaasheena ayaa si otomaatig ah u duubaya macluumaadka uu biraawsarkaagu u diro mar kasta oo aad booqato degel. Diiwaanadan serverka waxaa ku jiri kara macluumaad sida codsigaaga webka, cinwaanka borotokoolka internetka (IP), nooca biraawsarka, luqadda biraawsarka, taariikhda iyo waqtiga codsigaaga iyo hal ama in ka badan oo cookies ah oo si gaar ah u aqoonsan kara biraawsarkaaga. Macluumaadkan waa la tirtiraa xilliyo ahaan iyadoo qayb ka ah howlaha dayactirka caadiga ah.
Xogta Macluumaadka waxay ka soo ururisaa Xisbiyada Saddexaad:
Cint waxay ka heli kartaa Macluumaadka Shakhsiyeed, akhlaaqda iyo / ama macluumaadka dadka ee dhinacyada saddexaad, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xadidnayn, aaladaha maaraynta xogta, shabakadaha xayeysiiska, xafiisyada adeegga macluumaadka, iibiyeyaasha kale ee cilmi baarista suuqa iyo / ama aaladda warbaahinta bulshada. Cint waxay u adeegsan kartaa Xogta Shakhsiyeed, habdhaqanka iyo / ama xogta dadka ee laga helay dhinacyadan saddexaad ujeeddooyin kala duwan, oo ay ku jiraan, laakiin aan xad lahayn, ansaxinta xogta, lifaaqa xogta, horumarinta fikradaha suuqgeynta, ujeedooyinka ogaanshaha khayaanada.
YUU KU SAMEEYAA MACLUUMAADKA QOFKA?
Cint kama dhigi doonto macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed mid ay heli karaan cid saddexaad oo kale iyadoon lagaa helin ogolaansho, illaa ay u baahan tahay sharci ahaan, sida hoos lagu sii qeexay.
Haddii sahan ama barnaamij cilmi baaris kale oo suuq ah ama waxqabad kale ay ka mid tahay sameynta Xogta Shakhsiyeed ee loo heli karo cid saddexaad, Cint waxay la wadaagi doontaa oo keliya Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ogolaanshahaaga. Haddii xogta la ururiyey loo adeegsado qaabeynta tirakoobka si loo fahmo isbeddellada iyo dookhyada kooxaha gaarka ah ama dhagaystayaasha ku dhex jira dadweynaha guud ahaan, kaliya macluumaadka shakhsiyadeed ee kooban ee la wadaago ayaa loo isticmaali doonaa oo keliya ujeedooyinka cilmi baarista suuqa iyo markale oo keliya oggolaanshahaaga.
Cint wuxuu u shaacin karaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, xogta muuqaalka, ama macluumaadka kale ee cilmi baarista ee dhinacyada saddexaad sida soo socota:
ee la xidhiidha adeegyada cilmi-baarista suuqa (oo ay ku jiraan barnaamijyadeenna dhiirrigelinta ah), wakiilladayada, qandaraasleyaasha ama Wada-hawlgalayaasha fududeeya adeegyadaas; iyadoo la bixinayo, si kastaba ha noqotee, dhinacyada noocaas ah ayaa laga xaddiday inay u adeegsadaan Xogtaada Shakhsi ahaaneed si kasta oo aan ka ahayn inay adeegyada u fidiyaan Cint;
wakiillada, qandaraaslayaasha ama Wada-hawlgalayaasha Cint ee la xiriira adeegyada ay shakhsiyaadkan ama hay'adahaas u qabtaan, ama la leeyihiin, Cint. Wakiiladan, qandaraaslayaasha ama Wada-hawlgalayaasha ayaa laga xaddiday inay u adeegsadaan macluumaadkan si kasta oo aan ka ahayn inay siiyaan adeegyo Cint. Cint waxaa laga yaabaa, tusaale ahaan, inay siiso Xogta Shakhsi ahaaneed wakiilada, qandaraaslayaasha ama Wada-hawlgalayaasha martigelinta websaydhadeenna sahaminta, ururinta xogta ama howlaha ka-baaraandegista, ama inay kuu soo dirto macluumaad aad codsatay, laakiin dhinacyadaas uma isticmaali karaan Xogtaada Shakhsiyeed ujeedooyinkooda aan la xiriirin shaqada ay noo qabanayaan;
Macaamiisha Macaamiisha, laakiin kiisaskaas macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waxaa lala wadaagi doonaa oo keliya Macaamiisha:
i) ogolaanshahaaga, ama ii) ujeedooyin cilmi baaris oo la oggol yahay iyadoo la raacayo xeerarka Ururka Fahmitaanka iyo ESOMAR.
iyadoo la xiriirta codsiga ama shuruudda codsi kasta oo sharci ah oo ka yimaada mas'uuliyiinta dowladda, si loo buuxiyo amniga qaranka ama shuruudaha sharci fulinta;
iyadoo la raacayo habraac sharciyeed loo baahan yahay, dhinaca qasabka la xiriira;
marka Cint ay aaminsan tahay in shaacintu ay tahay mid lama huraan ah ama ku habboon si looga hortago waxyeelo jireed ama dhaqaale xumo ama la xiriirta fal sharci darro ah oo laga shakiyo ama dhab ah;
Marka la eego iibinta, meeleynta, ama wareejinta kale ee 'Cint', taas oo ay dhacdo Cint waxay u baahan doontaa iibsade kasta oo noocaas ah inuu ogolaado inuu kula dhaqmo Xogta Shakhsi ahaaneed si waafaqsan Ogeysiiska Asturnaanta. Haddii ay dhacdo in iib, meeleyn, ama wareejin kale oo loo yaqaan 'Cint' aan lagu dhammaystirin iibsadaha mustaqbalka, Cint wuxuu u baahan doonaa kooxda saddexaad inaysan isticmaalin ama u siidaynin Macluumaadkaaga Shakhsiyeed si kasta ha noqotee iyo inay gebi ahaanba tirtirto isla; ama
Cint wuxuu ruqsad u siin karaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee xaddidan dhinacyada saddexaad (tusaale, xog-wadeennada xogta, xog-ururiyayaasha, iwm.) Ujeeddooyinka cilmi-baarista suuqa, oo ay ku jiraan, laakiin aan xad lahayn, ruqsad siinta heer shaqsiyeed iyo / ama xog-urursan (tusaale, wax soo saar iyo / ama adeeg iibsi ama adeegsiga adeegsiga, xogta booqashada degellada, taariikhda raadinta internetka, iwm.) ee loogu talagalay horumarinta aragtiyaha dhagaystayaasha iyo / ama moodooyinka isku eg, ujeeddada iibinta xogta noocaas ah ee macaamiisha kooxda saddexaad ujeeddadeed fulinta falanqaynta iyo bixinta sirdoonka suuqgeynta. Macluumaadkan waxaa lagu wadaagi karaa iyada oo loo marayo cookie (Aqoonsiga cookie), aqoonsiga xayeysiinta moobiilka, cinwaanka emaylka ama qaab kale. Ka dib markii qaab-isku mid ah ama isu-soo-ururinta la sameeyay, Xogta Shakhsiyeed waa la tirtiray.
Intaa waxaa sii dheer, aqoonsiga macluumaadka iyo macluumaadka lagu ururiyey qaab otomaatig ah ayaa loo siin karaa dhinacyada saddexaad, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xad lahayn, Macaamiisha, Wada-hawlgalayaasha, wakiillada iyo / ama iibiyeyaasha ujeeddooyinka aqoonsiga jawaab-bixiyeyaasha dib-ula-xiriirida sahannada ama isgaarsiinta, ogaanshaha khayaanada iyo / ama ka hortagga, iswaafajinta keydka xogta, ansaxinta xogta, lifaaqa xogta, koodh gareynta, kala soocida xogta, iyo abaalmarinta, dhiirigelinta, iyo / ama xatooyada ama adeegyada la xiriira dallacsiinta.
Cint wuxuu ilaalin karaa Xogta Shakhsiyeed ama macluumaadka lagu aqoonsan karo mashiinka si loo qanciyo codsiyadaada iyo / ama shuruudaha ganacsi ee Cint. Tusaale ahaan, Cint waxay haysan kartaa cinwaanka emaylka ee Kaqeybgalayaasha ka baxay si loo hubiyo in Cint ay u hoggaansanaato rabitaan kasta oo noocaas ah. Xifdinta kasta ee Xogta Shakhsiyeed waxaa loo sameeyaa iyadoo la waafajinayo sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo.
Mar labaad, Cint waxay la wadaagi doontaa oo keliya macluumaadkaaga shakhsiyeed ogolaanshahaaga.
WARBIXIN CINTU MA SII QAADAA CARRUURTA?
Cint si ogaal la’aan ah kama uruuriso Macluumaadka Shakhsiyeed carruurta ka yar da'da meesha looga baahan yahay ogolaanshaha waalidka. Haddii Cint ay ogaato in Cint ay si kama 'ah u ururisay Xogta Shakhsiyeed canug ka hooseeya da'da da'da looga baahan yahay ogolaanshaha waalidka, Cint waxay ka tirtiri doontaa Xogtaas Shakhsiyeed keydkeena.
WAA MAXAY AMMAANADAHA AY FARSAMAYSAY QARANKA SI AY U CAAWISO HUBISTA AMNIGA XOGTAADA QOFKA AH?
Amniga Xogtaada Shakhsi ahaaneed aad ayey muhiim noogu tahay. Iyadoo la raacayo, Cint waxay dejisay ilaalin macquul ah oo farsamo, muuqaal, iyo maamul si loo ilaaliyo macluumaadka ay Cint aruuriso. Kaliya shaqaalaha u baahan helitaanka macluumaadkaaga si ay u gutaan waajibaadkooda ayaa loo oggol yahay inay marin u helaan macluumaadkaaga shakhsiyeed.
In kasta oo ay ilaalinayso adeegsiga Cint, idaacadaha laga sii daayo internetka iyo / ama shabakadda moobiilku ma ahan kuwo gebi ahaanba ammaan ah Cint-na ma dammaanad qaadayso nabadgelyada gudbinta khadka tooska ah. Cint mas'uul kama aha wixii qalad ah ee shakhsiyaadka u gudbinaya Xogta Shakhsi ahaaneed ee Cint.
KA HELISTA MACLUUMAADKA QOFKA
Cint waxay kaydin doontaa Macluumaadka Shakhsiyeed ugu badnaan intii loo baahdo ujeedada hawsha hawsha ama sidaad adigu u oggolaatay. Muddadan sidoo kale waxay ku saleysnaan doontaa Cint ama mid ka mid ah heshiisyada qandaraaska ah ee aan leenahay Guddi-hoosaadyada ama Wada-hawlgalayaasha, muddooyinka khuseeya xaddidaadda (keenista sheegashooyinka) ama sida waafaqsan sharciga quseeya.
Waxaad xaq u leedahay inaad dib u eegto, saxdo, ama tirtirto Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, iyadoo la raacayo sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo. Gaar ahaan:
Xaqa helitaanka - Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xaqiijin iyo macluumaad ku saabsan ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Xuquuqda saxitaanka - Waxaad xaq u leedahay inaad hesho wax khaladaad ah oo ku saabsan Xogtaada Shakhsiyeed la saxo
Xuquuqda in la tirtiro - Waxaad xaq u leedahay in lagaa tirtiro Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed (xuquuqdani waxay ku egtahay xogta oo sharciga iyo qaanuunka loo raacayo oo keliya lagu shaqeyn karo ogolaanshahaaga, haddii aad ka noqoto oggolaanshahaaga ka shaqeynta)
Xaq u lahaanshaha xaddidaadda ka shaqeynta xogta - Waxaad xaq u leedahay inaad dalbato in ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiga ah la xaddido (inta lagu guda jiro baaritaanka waxkastoo lagu maamuusayo codsigaaga, helitaanka Cint ee Macluumaadkaaga Shakhsiyeed wuu xadidnaan doonaa)
Xuquuq u lahaanshaha xogta - Waxaad xaq u leedahay in lagu wareejiyo Macluumaadkaaga Shakhsiyeed dhinac kale (xuquuqdan waxay ku egtahay xogta aad bixisay)
Haddii aad rabto inaad isticmaasho wax ka mid ah xuquuqdaada, waxaad nala soo xiriiri kartaa codsi noocan oo kale ah adoo adeegsanaya
faahfaahinta xiriirka ee ku qoran "NALA SOO XIRIIR" qaybta hoose.
Marka ay hesho codsi shaqsi, Cint waxay isku dayi doontaa inay ku siiso macluumaadka la codsaday 30 maalmood gudahood, iyadoo bixinaysa in codsiga uu yahay mid si macquul ah looga jawaabi karo muddadaas. Haddii waqti dheeraad ah loo baahdo, Cint waxay kugu soo wargelin doontaa soddon maalmood gudahood.
Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha noqotee, Cint waxaa laga yaabaa inaysan awoodin inay bixiso marin qaar ka mid ah Xogta Shakhsiyeed. Tani waxay dhici kartaa markii:
bixinta marin u helida Xogta Shakhsiyeed waxay u egtahay inay kashifayso Xogta Shakhsiyeed ee ku saabsan dhinac saddexaad;
bixinta macluumaadka waxay muujinaysaa macluumaad ganacsi oo qarsoodi ah; ama
macluumaadka waxaa loo soo aruuriyay ujeedooyinka baaritaanka sharciga.
Haddii Cint ay diido codsi shaqsiyeed ee ku saabsan helitaanka Xogtooda Shakhsi ahaaneed, Cint waxay la talin doontaa shakhsiga sababta diidmada.
SIDEE AYAAN KU XULTAA?
Go'aankaaga inaad kaqeybqaadato sahan ama barnaamij kale oo cilmi baaris suuqa ah, aad uga jawaabto su'aal kasta oo sahan gaar ah ama aad siiso Xogta Shakhsiyeed, oo ay ku jiraan Xogta Shakhsiyeed ee Xasaasiga ah, marwalba waa la ixtiraami doonaa.
Waad dooran kartaa inaad kaqeyb gasho sahan gaar ah ama barnaamij cilmi baaris kale oo suuqa ah, inaad diido inaad ka jawaabto su'aalaha qaarkood ama joojiso kaqeybgalka wakhti kasta. Si kastaba ha noqotee, ku guuldareysiga inaad bixiso macluumaad gaar ah ama si buuxda uga qayb gasho sahan gaar ah ayaa kaa hor istaagi kara inaad hesho magdhow dhiirigelin ah ama kaqeybgal mustaqbalka daraasado cilmi baaris gaar ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan dhiirigelinta, fadlan tixraac Shuruudaha iyo Xaaladaha Cint adigoo gujinaya halkan.
Xubnaha Guddiga ee mid ka mid ah Mulkiileyaashayada Guddi ee aan mar dambe rabin inay ka qaybgalaan sahaminta, barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa ama ay ku xiran yihiin adeegsiga teknoolojiyad otomaatig ah ama waxqabadyo kale, oo ay ku jiraan buskudka, way ka bixi karaan booqashada bogga Nidaamka Asturnaanta ee bogga xubin ka mid ah guddiga aad ka tirsan tahay. Bogga Nidaamka Asturnaanta ayaa sidoo kale lagu heli karaa adigoo gujinaya xiriiriyeyaasha ka-bixidda ee marti-qaadyada sahaminta. Ugu dambeyntiina, Xubnaha Guddiga iyo Kaqeybgalayaashu way nala soo xiriiri karaan iyagoo adeegsanaya faahfaahinta xiriirka ee lagu bixiyay qaybta "NAGA SOO XIRIIR"
Cint wuxuu kaydiyaa xogta Midowga Yurub (EU) iyo Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA). Si kastaba ha noqotee urur caalami ah, shirkad xiriir la leh Cint ama adeeg bixiye aan xiriir la lahayn ayaa aruurin kara, farsamayn kara, kaydin kara ama wareejin kara Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed ee ka baxsan waddanka aad ka timid.
The (EU) iyo Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA):
Hay'adaha sharciga ah ee Cint ee ka baxsan EU iyo EEA waxay galeen heshiisyo ilaalin macluumaad shirkadeed iyadoo la adeegsanayo qodobo heshiis qandaraas ah oo ay diyaariyeen Guddiga Yurub. Cint waxay heshiis kula jirtaa adeeg bixiyeyaasha iyo bixiyeyaasha kale ee ganacsiga ee u baahan dhinacyada qandaraasleyda inay ixtiraamaan sirta macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo inay u maareeyaan Macluumaadka Shaqsiyadeed ee Yurub si waafaqsan sharciyada ilaalinta xogta Yurub.
Iyadoo la raacayo sharciyada ilaalinta xogta ee Xiriirka Ruushka, Cint waxay aruurisaa, ka shaqeysaa oo ay kaydisaa Xogta Shakhsiyeed ee muwaadiniinta Ruushka ee Xiriirka Ruushka oo kaliya kadibna xogtaas ku wareejisaa EU ama EEA.
XIRIIRKA BARNAAMIJYADA SADDEXAAD
Ogeysiiskaan Khaaska ah wuxuu khuseeyaa oo keliya sahannadayada iyo barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa, mana khuseeyo wax soo saar ama adeeg kale. Baadhitaanadeena ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa waxaa ku jiri kara xiriiro dhowr degel websaydh ah oo ay Cint aaminsan tahay inay bixin karaan macluumaad waxtar leh. Siyaasadaha iyo nidaamyada ay tilmaamayso Cint halkan laguma dabaqi karo websaydhyadaas. Cint waxay kugula talineysaa inaad si taxaddar leh u akhrido ogeysiisyada asturnaanta ama siyaasadaha bog kasta oo aad booqato si aad uga hesho macluumaad ku saabsan asturnaantooda, amniga, xog ururinta iyo siyaasadaha qaybinta. Adoo ka qayb qaadanaya mid ka mid ah sahankeena ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista suuqa ama mid ka mid ah degelladayada internetka ka dib wixii isbeddel ah ee Ogaysiiska Asturnaanta, waxaad si xor ah oo gaar ah noo siisaa oggolaanshahaaga inaan soo ururinno, adeegsanno, wareejinno oo aan shaaca ka qaadno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed qaabkii lagu caddeeyey markaa- Ogeysiiska Asturnaanta hadda.
Aad u qiimee fikirkaaga iyo jawaab celintaada. Haddii aad rabto inaad dib u eegto, saxdo, ama tirtirto Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ama aad hayso su'aalo, faallooyin ama talo bixin, ama haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo sahankeenna ama barnaamijyada kale ee cilmi baarista ee suuqa ama aad su'aalo ka qabtid Xogtaada Shakhsiyeed, fadlan nala soo xiriir:
U soo mar emaylka: [emailka waa la ilaaliyay]
Ama boostada ku soo dir:
111 37 Stockholm, Sweden
DIGNIIN: Sarkaalka U hoggaansanaanta Asturnaanta
Ku saabsan Daraasadaha Pollfish
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa boggaga Pollfish. Pollfish waa madal sahamin on-line ah, iyada oo loo marayo, qof kasta oo laga yaabo inuu sameeyo sahan. Pollfish waxay lashaqeeyaan Soosaarayaasha codsiyada taleefannada casriga ah iyo milkiilayaasha degellada si ay fursad ugu helaan adeegsadayaasha barnaamijyadan / websaydhada oo ay ula macaamilaan su'aalaha sahaminta ah. Websaydhkani wuxuu adeegsadaa oo awood u siiyaa buskudka loo yaqaan 'Pollfish cookies'. Markuu adeegsadehu ku xirmo websaydhkan, Pollfish-ka ayaa lagu ogaadaa inuu isticmaalaha u qalmo sahan. Xogta ay soo aruurisay Pollfish waxay la xiriiri doontaa jawaabahaaga su'aalaha marka markasta oo Pollfish ay u soo dirto su'aalaha noocan ah dadka isticmaala ee u qalma. Liiska buuxa ee xogta ay heshay Pollfish iyada oo loo marayo degelkan, fadlan si taxaddar leh u akhri ereyada jawaabeyaasha Pollfish ee ku yaal https://www.pollfish.com/terms/respondent. Adiga oo isticmaalaya degelkan waxaad aqbashaa dukumintigan siyaasad gaar ah waxaadna halkan ku siineysaa oggolaanshahaaga cad ee meelaynta cookie Pollfish-ka ah ee nidaamkaaga iyo ka shaqaynta Pollfish ee xogta kor ku xusan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagugu wargaliyay inaad joojin karto hawlgalka Pollfish wakhti kasta adoo isticmaalaya Pollfish “qeybta ka bixida” ee laga heli karo bogga Pollfish ama adigoo naafada ka dhigaya “cookies-ka kooxda saddexaad” goobahaaga biraawsarkaaga. Waxaan mar kale kugu martiqaadeynaa inaad hubiso shuruudaha adeegsiga Jawaab bixiyaha Pollfish, haddii aad rabto inaad aragti faahfaahsan ka bixiso qaabka ay u shaqeyso Pollfish.
TODOBAAD, GOOGLE IYO AMAZON MA AHA SNAQUBSIGA NOR LAGU SHAQAYNAYNO SIDII LOOGU TALAGALAY Tartankan / Jiidadan. MAYA BARNAAMIJYADA TODOBAADKA AYAA LOO ISTICMAALAY IN AY YAHAY PRAZES.